काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय…
काठमाडौँ, १३ जेठ (रासस) ः संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को यही जेठ १५ गते बस्ने संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को राजश्व र व्ययको अनुमान(बजेट) पेश हुने भएको छ…
मेलम्ची, २० वैशाख । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्रावती नदीबाट अनधिकृत रुपमा गिट्टी बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले टेण्डर खोलेर नदीजन्य पदार्थको निकासीलाई अनुमति दिएको इन्द्रावती र सुनकोशी नदीबाट…
बाबियाचौर, म्याग्दी, १६ वैशाख । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ घराम्दीका बासिन्दाले चन्दाबाट आर्थिक स्रोत जुटाएर १० किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरेका छन् । स्थानीय, प्रवासी, छिमेकी गाउँका बासिन्दाबाट रु एक करोड १७…
बेनी, म्याग्दी, १६ वैशाख । सरकारी कामकाज स्थानीयस्तरमै हुन थालेपछि म्याग्दीका गाउँहरु भरिन थालेका छन् भने सदरमुकाम बेनीबजार खाली हुँदै जान थालेको छ । संघीयताको कार्यान्वयसंगै स्थानीय निकाय बलियो भएर…
बाबियाचौर, म्याग्दी, १६ वैशाख । रोजगारी, पेशा, व्यवसाय र अध्ययनका लागि विदेशिएका रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेगका बासिन्दाले गाउँमा करोडौँको विकास भित्र्याएका छन् । देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा बाध्यताले विदेशिएका बेगखोलाका बासिन्दाले…
काठमाडौँ, १४ वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्मकै ठूलो सौर्य परियोजनाको निर्माण शुरु गरेको छ । विभिन्न विवाद र संसदीय समितिहरुको झमेलामा फसेको सो आयोजना आजदेखि नुवाकोटको त्रिशूलीमा निर्माण शुरु…
भक्तपुर, १३ वैशाख । जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू) सम्पदा पुनःनिर्माण कार्यबाट पछि हटेको छ । विसं २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुरयाएका भक्तपुरका सम्पदाहरुको पुनःनिर्माण कार्यमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताबाट केएफडब्लू…
दोलखा, १३ वैशाख । भूकम्पका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणका लागि सरकारी अनुदान लिएर आवास नबनाउनेले पहिलो किस्ता रु ५० हजार फिर्ता गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले निजी…
काठमाडौँ, १२ वैशाख । चालू आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ८९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को छदेखि नौ महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित आँकडा…
काठमाडौँ, १२ वैशाख । सरकारका आर्थिक कारोबार आजदेखि विद्युतीय प्रणालीबाट प्रारम्भ भएको छ । सूचना प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गर्दै सबै सरकारी कार्यालयका कामकारबाही बिना कागजात सम्पादन गर्ने नीतिअनुरुप सो प्रणालीबाट…
काठमाडौँ, १२ वैशाख । जैविक वस्तुको बारेमा आधुनिक सूचना र सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरी बजारको विकास, विस्तार र व्यवस्थापन गर्ने सञ्चालित ‘नेपाललाई हरियाली बनाउँ’ कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न…
नेपाल टेलिकमद्वारा विद्यालय र अस्पताललाई सहयोग
काठमाडौँ, ११ वैशाख । नेपाल टेलिकमले चौधौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा घोषणा गरे अनुरुप संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न अस्पताललाई कम्बल उपलब्ध गराउनुका साथै केही सामुदायिक विद्यालयमा आइसिटि सेन्टर स्थापना गरेको…
काठमाडौँ, १० वैशाख । नेपालीको कूल ऋण रु दुई हजार ११४ ले बढ्न गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्रतिव्यक्ति ऋण रु २२ हजार १२९ रहेकामा यस वर्ष बढेर…
सुरुङ्गा, झापा, १० वैशाख । विदेशमा आफैंले कमाएर पठाएको सम्पत्तिले घर त बन्यो तर फर्किएर आउँदा त्यही घरबाट आफू स्वयं निकालिए । आफ्नै घरबाट निकालिँदा ती पुरुष झस्किए । कारण…
ललितपुर, १० वैशाख । यार्सागुम्बाले कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले यार्सागुम्बा पाइने ठाउँमा गरिरहेको अध्ययनका क्रममा कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि बढेको पाइएको हो…
काठमाडौँ, ९ वैशाख । तारे होटलमा सञ्चालित पाँचवटा क्यासिनो (जुवाघर) ले सरकारलाई रु १४ करोड राजश्व तिर्न अटेर गरेका छन् । क्यासिनो अनुमति दस्तुरबापतको रु १४ करोड रकम नबुझाएको महालेखा परीक्षकको…
काठमाडौँ, ९ वैशाख । रानीपोखरी पुनःनिर्माणका क्रममा अहिलेसम्म रु दुई करोड ५० लाख सकिएको छ । विसं २०७२ को गोरखा भूकम्पका कारण पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको रानीपोखरी पुनःनिर्माणका लागि रु…
म्याग्दी, ५ वैशाख । नेपाल र चीनको सीमा क्षेत्र मुस्ताङको कोरला नाकासम्मको सडकखण्डमा १४ वटा पक्की पुल निर्माण गरिने भएको छ । कालीगण्डकी नदीको किनारैकिनार खनिएको यस सडकको विभिन्न सहायक…
नुवाकोट, ५ वैशाख । निर्माणाधीन त्रिशूली–काठमाडौँ २२० केभी ‘डबल’ प्रसारण लाइनको काम पछिल्लो समय तीव्र बनाइएको छ । नुवाकोट र रसुवामा उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उद्देश्यले १४ फागुन,…
काठमाडौँ, ४ वैशाख । चीन सरकारको सहुलियत ऋणमा हालै ल्याइएका दुई वाई–१२ विमान आज औपचारिक रुपमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच…
काठमाडौँ, ४ वैशाख । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिलाई खुला, पारदर्शी, व्यवस्थित र विकसित गर्न सूचना प्रविधि ऐन ल्याउन लागेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सूचना…
नुवाकोट, ३ वैशाख । भारत सरकारको सहयोगमा यहाँको तेइस हजारभन्दा बढी भूकम्प प्रभावितलाई आवास पुनःनिर्माणमा सहयोग पुरयाउन ‘नेपाल आवास पुनःनिर्माण परियोजना सञ्चालन आएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ को…
काठमाडौँ, ३ वैशाख । उद्योग विभागमा चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा विदेशी लगानीका १९४ उद्योग दर्ता भएका छन् । विभागले दिएको जानकारीअनुसार फागुन मसान्तसम्म ठूला १०, मझौला चार र साना…
वालिङ, स्याङ्जा, २ वैशाख । देशका विभिन्न शहरमा फोहरमैला व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेका बेला स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले भने फोहरमैला बिक्रीबाट आम्दानी लिँदै आएको छ । उक्त नगरपालिकाले संकलन गर्न थालेकोे चार…
मेलम्ची आयोजना: सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’, भदौसम्ममा पानी खसालिने
मेलम्ची, २९ चैत । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । आज एक कार्यक्रमबीच उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले ‘ब्रेक थ्रु’ भएको घोषणा गर्नुभएको हो । सिन्धु अडिटबाट ग्याल्थुमसम्मको ७.४…
काठमाडौँ, २८ चैत । एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी आवमा मनसुन सामान्य हुने र…
काठमाडौँ, २७ चैत । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा आजदेखि सौर्य ऊर्जा (सोलार) प्रणालीबाट बत्ती बालिएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा बनेको एक मेगावाट क्षमताको उक्त प्रणालीको सिंहदरबारमा आज आयोजित…
चितवन, २७ चैत । भरतपुर महानगरपालिका र चीनको केन्द्रीय दक्षिण विश्वविद्यालयबीच शैक्षिक सहकार्यको सम्झौतासम्बन्धी पत्रमा आज हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिमा २१७ शैक्षिक कार्यक्रम र स्नातक तहमा…
बाबियाचौर, म्याग्दी, २५ चैत । जिल्लाका सहकारी संस्थाले वार्षिक करीब रु चार अर्ब लगानी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यहाँका सहकारीले रु तीन अर्ब ७० हजार ६५ लाख…
म्याग्दी, २५ चैत । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घारमा १४ मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण शुरु भएको छ । म्याग्दी हाइड्रोपावर प्रालिद्वारा निर्माण हुन लागेको यस आयोजनाले पहुँचमार्ग विस्तारको काम…
काठमाडौँ, २० चैत । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको श्वेतपत्र कुनै दलविशेषमा लक्षित नभई वस्तुस्थितिको समीक्षामा केन्द्रित गरिएको यथार्थ तस्वीर रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा…
रसुवा, ७ चैत । उत्तरी रसुवाको टिमुरे तथा थुमन क्षेत्रमा निर्माणाधीन १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी हाइड्रोपावरको काम दु्रत गतिले अगाडि बढेको छ । हाइड्रोपावरका आयोजना प्रमुख छवि गैरेका अनुसार विद्युत्गृहमा…
काठमाडौँ, ६ चैत । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीले आगामी डेढ वर्षभित्र ८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भएका छन् । प्राधिकरणले तयार पारेको कार्ययोजनाका आधारमा माथिल्लो तामाकोशी, कुलेखानी…
चौतारा, ६ चैत । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सिन्धुपाल्चोकको चाकु ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको काम हालसम्म ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । निजी क्षेत्रको शिवश्री हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिद्वारा निर्माण भइरहेको २२.१ मेगावाट…
चितवन, ६ चैत । राजधानी काठमाडौँसँग तराई जोड्ने लाइफलाइनका रुपमा रहेको नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तारको कामले तीव्रता पाएको छ । कामले तीव्रता पाएसँगै ३३.२ मध्ये २४.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ…
कञ्चनपुर, ५ चैत । राष्ट्रिय गौरवको योजनाअन्तर्गत कार्य अगाडि बढाइएको मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । पश्चिम क्षेत्रमा विस्तार हुने…
नवलपरासी, ५ चैत । रकम अभावका कारण नवलपरासी र रुपन्देहीमा सञ्चालित राष्ट्रिय आयोजना अलपत्र परेका छन् । डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका अनुसार पर्याप्त बजेट प्राप्त नहुँदा नवलपरासी र रुपन्देहीमा सञ्चालित…
काठमाडौँ, २ चैत । कर्मचारी सञ्चय कोषले संस्थागत रुपमा काम नगर्नेलाई समेत व्यक्तिगत रुपमा कोष कट्टीको सुविधा दिने भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को नवौँ संशोधनपछि कोषले…
काठमाडौँ, १ चैत । चीनसँग जोडिएको तातोपानी भन्सार नाकाको पुनःनिर्माणका लागि चीनले गर्ने सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा चिनियाँ सहयोगअन्तर्गत आज तातोपानी भन्सार नाका, सिन्धुपाल्चोक अस्पताल…
उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध: प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, १ चैत (रासस) ः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणमा सरकार पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध भएको बताउनुभएको छ । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा आज एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै…
सुर्खेत, ३० फागुन । सुर्खेतका स्थानीय तहमा तोकिएका बैंक नहुँदा यहाँका नागरिकलाई समस्या भएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गएपनि बैंक नजाँदा सरकारी कारोबार गर्न समस्या हुने गरेको छ ।…
बैतडी, २९ फागुन । जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहमा बैंक स्थापना हुन सकेको छैन । बैंक स्थापना नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक सदरमुकाम धाउन बाध्य छन् । सिगास, शिवनाथ, पञ्चेश्वर, दोगडाकेदार,…
विराटनगर, २२ फागुन । सीमावर्ती भारतीय बजार जोगबनीबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका एक भारतीयलाई रु ४५ लाख नेपाली रकम र गाडीसहित प्रहरीले पक्राउ गरी आज यहाँ सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला…
काठमाडौँ, २१ फागुन । सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले विभिन्न पाँचवटा जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढाएको छ । ती आयोजनाको कूल क्षमता दुई हजार २१० मेगावाट रहेको छ ।…
जाली नेपाली नोटसहित छ जना पक्राउ
काठमाडौँ, १५ फागुन । प्रहरीले नक्कली नेपाली नोटको कारोबारमा संलग्न गिरोहका पाँच जनालाई नक्कली नोटसहित पक्राउ गरेको छ । बल्खुस्थित कार्की फार्मेसीमा औषधि किन्न आएका दुई व्यक्तिका साथबाट रु पाँच…
काठमाडौँ, १५ फागुन । मुलुकको कूल जलविद्युत् क्षमतामध्ये २८ हजार ८२३ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना निर्माणका चरणमा रहेका छन् । जल तथा ऊर्जा आयोगले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपालको…
चौतारा, १४ फागुन । माथिल्लो भोटेकोशी विद्युत् आयोजनाको पुनःनिर्माण शुरु भएको छ । तीन वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको सो आयोजनाको पुनःनिर्माण कार्य शुरु भएपनि विद्युत उत्पादन हुन अझै दुई वर्ष…
मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व ल्याउँछौँ: अर्थमन्त्री डा खतिवडा
काठमाडौँ, १४ फागुन । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख भएका आर्थिक विषयलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ । मन्त्रालयमा…
भक्तपुर, १० फागुन । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत १५ किलोमिटर लामो सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्ड अब आठ लेन बन्ने भएको छ । सडक आठ लेनको बन्ने भएपछि सडक विभागले आज भक्तपुरको जगातीमा आयोजना गरेको…
काठमाडौँ, ७ फागुन । सरकारले विद्युत् आयोजनाका काम गर्न आउने परामर्शदाता, विदेशी प्राविधिक तथा प्रवद्र्धकलाई विदेशी विनिमय सुविधा सिफारिसलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न ‘विद्युत् आयोजनाका लागि विदेशी विनिमय सुविधा सिफारिससम्बन्धी…
काठमाडौँ, ४ फागुन । सरकारले विद्युत् प्रवाहलाई सहज बनाउने लक्ष्यका साथ देशभर नै प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखे पनि काम भने कछुवाको गतिमा अगाडि बढेका छन् । कतिपय स्थानमा…
काठमाडौँ, ३ फागुन । उद्योग मन्त्रालयले रसुवा जिल्लाको त्रिशूली नदीमा रु २० अर्ब ३८ करोडको लागतमा १०२ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय…
रु १० अर्ब ऋण सहयोग
काठमाडौँ, २९ माघ । एशियाली विकास बैंकले नेपाल सरकारलाई ग्रामीण सम्पर्क सुधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न रु १० अर्ब ऋण सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । उक्त बैंकले स्थानीय पूर्वाधार विकास…
मेलम्ची, २९ माघ । सिन्धुपाल्चोकबाट छ वर्षमा ११८ किलोग्राम ११ तोला ९३ लाल अवैध सुन प्रहरीले बरामद गरेको छ । तातोपानी नाकाबाट अवैध रुपमा सुन तस्करी गरी लैजाने क्रममा पछिल्लो…
विराटनगर, २८ माघ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नेपाल सरकारसँग विभिन्न निर्माण कार्य गरेबापत रु ४४ अर्ब रकम लिन बाँकी रहेको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले यहाँ आज…
अरुण तेस्रो आयोजनामा बम विस्फोट
संखुवासभा, २८ माघ । अज्ञात समूहले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउसको निर्माणाधीन भवनमा शनिबार राति बम बिस्फोट गराएका छन् । संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका–३ को दिदिङमा रहेको पुखुवा पावर हाउसमा…
दार्चुला, २६ माघ । सरकारी लगानीबाट निर्माण भएको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । आयोजनाले एक महिना बढी समय लगाएर दुई युनिटको परीक्षण सफलतापूर्वक…
काठमाडौँ, २३ माघ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ६ महिनामा विभिन्न १७ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ । सर्वेक्षण सम्पन्न गरी निर्माणको चरणमा प्रवेश…
रौतहट, २३ माघ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गरेको सन्तपुर एकीकृत नमूना दलित बस्तीको साँचो नमूना बस्ती निर्माण समितिका अध्यक्ष सत्यनारायण माझीलाई आज हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।…
कोरिया सरकारले एक अर्ब दुई करोड अनुदान दिने
काठमाडौँ, २३ माघ । एकीकृत ग्रामीण विकासका लागि रु एक अर्ब दुई करोड अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने भएको छ । विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा नवीनतम खोज एवं अध्ययन गरी नेपालको सामाजिक, आर्थिक…
सप्तरी, १९ माघ । स्थानीय जनतालाई समस्या पर्दा त्यसको समाधान गरिदिने र उनीहरुलाई सहजता प्रदान गर्ने काम जनप्रतिनिधिको हुनुपर्ने हो । तर सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका एक स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनतालाई सहजता…
दार्चुला, १७ माघ । तीस मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको दोस्रो युनिटबाट परीक्षण उत्पादन आजदेखि शुरु भएको छ । पहिलो युनिटबाट १५ मेगावाट उत्पादन गरिरहेकामा दोस्रो युनिटबाट उत्पादित बिजुली परीक्षणका…
आर्थिक सहायता वितरण नगर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ, १७ माघ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भएको अवधिसम्म आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध नगर्न÷नगराउन अर्थ र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त…
काठमाडौँ, १७ माघ । उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने बताउनुभएको छ । बूढीगण्डकी सरोकार समितिले आज ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजना गरेको गोरखा र…
काठमाडौँ, १६ माघ । दक्षिण एसियाली लेखा व्यवसायी महासंघ (साफा) को सम्मेलन आजदेखि यहाँ शुरु भएको छ । सदस्य संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आइक्यान) ले आफ्नो २१ औँ वार्षिकोत्सवको…
दश अर्बको लगानी कोष स्थापना गर्दै एनआरएन
काठमाडौँ, १६ माघ । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएन)ले नेपालको लगानी प्रवद्र्धनका लागि रु १० अर्बको लगानी कोष स्थापना गर्ने भएको छ । एनआरएन र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) बीच आज…
दार्चुला, १६ माघ (रासस) ः चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको दोस्रो युनिट अर्थात् १५ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन परीक्षण सम्पन्न भएकोे छ । यो सँगै १५ मेगावाट विद्युत् भोलिदेखि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने…
एक करोड बक्यौता रकम असुल गर्न बाँकी
सप्तरी, १६ माघ । खानेपानी संस्थान राजविराजले २०७४ पुस मसान्तसम्म रु एक करोडभन्दा बढी बक्यौता रकम असुल गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । ग्राहकबाट रकम असुली नहुँदा कार्यालयको राजश्व संकलन…
काठमाडौँ, १६ माघ । चर्चामा आएको १६ वर्षपछि सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७३’ को प्रावधानका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको…
चितवन, १६ माघ । भूकम्पले घर भत्काएको तर लगत संकलनमा आफ्नो नाम छुटेको भन्दै पाँच हजार ७२४ जनाले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । कार्यालय…
काठमाडौँ, १५ माघ । सरकारले सहकारी संघसंस्था तथा बैंकका सदस्यको सम्पूर्ण जानकारीसहितको लगत राख्न सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन जारी भएको ठीक १० वर्षपछि आजैदेखि लागू हुनेगरी…
प्रथम प्रिन्टिङ एन्ड फोटोग्राफी प्रदर्शनी
काठमाडौँ, १५ माघ । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपिजे) को आयोजनामा यसै साता प्रथम प्रिन्टिङ एन्ड फोटोग्राफी प्रदर्शनी हुने भएको छ । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा यही माघ १९ देखि २१ गतेसम्म सञ्चालन…
काठमाडौँ, १५ माघ । गंगालाल हृदय केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । केन्द्रको २२ औँ वािर्षकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले मुटुको उपचारमा केन्द्रले…
काठमाडौँ, ४ भदौ । यातायात व्यवस्था विभागले सोमबारदेखि सवारी साधनमा विद्युतीय (इम्बोस्ड) नम्बर प्लेट राख्न शुरु गर्दैछ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राष्ट्रपति, सरकारी, व्यावसायिक र निजी गरी चार प्रकारका हुनेछन्…
काठमाडौँ, ४ भदौ । नेपाल बैंक लिमिटेड धरान शाखाबाट अनियमित एवं गैरकानुनी तवरले सुन कर्जा लिने/दिने कार्य गरी बैंकलाई रु १५ करोड ५१ लाखभन्दा बढी नोक्सानी पुरयाउने ११ जनालाई प्रहरीले…
नेपाल टेलिकमद्वारा पत्रकारहरू सम्मानित र ३१ गतेसम्म निःशुल्क एसएमएस सेवा दिने
काठमाडौँ, २९ साउन । नेपाल टेलिकमले देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोबाट पीडित भएकाहरुको उद्दार तथा राहत कार्यमा आवश्यक सहयोग पुरयाउनका लागि २०७४ साउन २९ गतेदेखि साउन ३१ गते मंगलबारसम्म आफ्नो…
बैतडी, २७ साउन । जिल्लाको पुरानो नगरपालिका दशरथचन्द नगरपालिकाको पहिलो नगरसभा तथा बजेट अधिवेशनले ५३ करोड ३९ लाख ९६ हजार ५३३ को बजेट पारित गरेको छ । बिहीबार सम्पन्न बजेट…
काठमाडौँ, २६ साउन । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य मुलुकका बाह्य मामिला÷विदेश÷परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरु (एसओएम)को १८औँ बैठक आज यहाँ शुरु भयो । नेपालसहित…
बैतडी, २६ साउन । बैतडीको मेलौली नगरपालिकाले रु ३० करोडभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार नगरपालिकामा सम्पन्न नगर परिषद्मा रु ३० करोड ६२ लाख १२ हजार ४८४ को…
काठमाडौँ, २५ साउन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरिरहेको विद्युत्को नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल भारत विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले न्यूनतम रु ८.८८…
काठमाडौँ, १९ साउन । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख अवरोधका रुपमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न सरकारले प्रवर्द्धकलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । निजी क्षेत्रको जग्गाको…
काठमाडौँ, १९ साउन । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा डा स्वर्णीम वाग्लेलाई नियुक्त गरेको छ । केही दिनअघि आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि सो…
नेस्याङमा जडीबुटीबाट रु १६ लाख राजस्व
मनाङ, १९ साउन । हिमालपारिको जिल्ला मनाङ नेपालकै महत्वपूर्ण जडीबुटी पाइने क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा पाइने जडीबुटी यार्सागुम्बा, जिम्बु, वन लसुन र सतुवा कानूनी रुपमा संकलन गर्न मान्यता दिइएको…
जुम्ला, १९ साउन । करदाता सेवा कार्यालय जुम्लामा गत आव २०७३/०७४ मा रु छ करोड ५९ लाख नौ हजार ७६७ राजस्व संकलन गरिएको छ । संकलित राजस्वमा सबैभन्दा बढी अग्रिम…
पोखरा, १८ साउन । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शुरु भएको छ । विमानस्थलको निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा छलफल गर्न पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण उच्चस्तरीय सहयोग समितिको आयोजनामा आज…
बक्यौता असुलले कामपाको आम्दानी बढ्यो
काठमाडौँ, १८ साउन । काठमाडौँ महानगरपालिकामा लामो समयदेखि उठ्न नसकेको बक्यौता रकम असुल भएपछि रु ३२ करोड १० लाख लक्ष्यभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी भएको छ । कामपाले आन्तरिक आम्दानीको लागि…
लक्ष्यभन्दा तीनगुणा बढी राजश्व संकलन
काठमाडौँ, १५ आउन । काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन इजाजत महाशाखाले यस वर्ष लक्ष्यभन्दा तीनगुणा बढी रु ३३ करोड राजश्व संकलन गरेको छ । कामपाको भवन इजाजत महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का…
बाजुरा, ९ साउन । दुर्गम जिल्लाका रुपमा रहेको बाजुराका विभिन्न ठाउँमा हुने स्लेट खानीको उत्खनन र त्यसको बिक्री व्यवस्थित हुन सकेको छैन । स्थानीय निकायले खानी व्यवस्थापनमा चासो नदेखाउँदा स्लेट…
काठमाडौँ, ५ साउन । नेपालको उद्योग क्षेत्रमा रु १५ अर्ब एक करोड ७२ लाख बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । उद्योग विभागले दिएको जानकारीअनुसार ३९५ उद्योगमा विदेशी लगानी भित्रिएको हो ।…
वीरगञ्ज भन्सारमा एक सय एक प्रतिशत राजश्व असुली
वीरगञ्ज, ४ साउन । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १०१ प्रतिशत राजश्व असुली गरेको छ । गत आवमा रु एक खर्ब सात अर्ब ११ करोड ३१ लाख ६३…
काठमाडौँ, ३ साउन । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी अनियमितता छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । अर्थ समितिको आजको बैठकले सांसद अब्दुल रज्जाकको संयोजकत्वमा सरस्वती बजिमय, इच्छाराज तामाङ, नरदेवी पुन,…
बैतडीको पाटन विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी
बैतडी, ३ साउन । सुदूरपश्चिमकै दोस्रो ठूलो बैतडीको पाटनमा अवस्थित विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको छ । विसं २०५२ देखि पूर्णरुपमा बन्द रहेको पाटन विमानस्थललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन काम…
काठमाडौँ, १ साउन । यातायात व्यवस्था विभागले बिपी राजमार्गमा रातिको समयमा चल्ने भाडाका सवारीसाधन आवतजावतमा रोक लगाएको छ । विभागमा आज विभागका पदाधिकारी, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीबीच बसेको बैठकले…
भक्तपुर, १ साउन । भक्तपुर मिनीबस सेवा समितिले आजबाट भक्तपुर–काठमाडौँ नगर बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । आज दूधपाटीस्थित समितिको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले बस सेवाको उद्घाटन…
काठमाडौँ, १ साउन । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले कुल पुँजी तथा निक्षेपमा कर्जा प्रवाहको अनुपात (सिसिडी रेसियो) मौद्रिक नीतिले पुरानै अवस्थामा फर्काइएकाले त्यसले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा २०…
चौतारा, १ साउन । विसं २०७४ मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका तीन जलविद्युत् आयोजनाबाट थप २९.६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई राट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने भएको छ । वैशाख १२…
जापानले शिक्षण अस्पताललाई ७० करोडको उपकरण दिने
काठमाडौँ, ३१ असार । महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवनविश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललाई जापान सरकारले करिब रु ७० करोड बराबरको स्वास्थ्य उपकरण सहयोग गर्ने भएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा दीपक महराले अगामी डिसेम्बरमा ती…
महिलाले घर बनाए १० प्रतिशत नक्सापासमा छुट
काठमाडौँ, ३१ असार । बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम तथा पारित गरिएको छ । आज बसेको नगरसभाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको नगर प्रमुख उद्धव खरेलले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले…
काठमाडौँ, ३० असार । संसदीय समितिले सौर्य विद्युत् उत्पादन सम्बन्धी कार्य तत्काल स्थगन गरी तीन दिनभित्र सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।…
पथरी ९मोरङ०, ३० असार । निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन कम हुँदा पूर्वाञ्चलमा परनिर्भरता बढेको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा निर्यात घट्दो क्रममा छ भने आयात झण्डै दोब्बरले बढेको छ । नेपालमा…
धनगढी, २९ असार । छोटो समयमा धेरै आर्थिक लाभ कमाउने लोभ गर्दा यहाँ कैयौँ परिवार लागि बिलापमा रुमल्लिएका छन् । गैरकानूनी मानिएको मिटर ब्याजमा गरिएको ठूलो लगानी असुल हुन नसकेपछि…
चितवन, २९ असार । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कालीखोलास्थित चार किलोमा खसेको पहिरो पन्छाएपछि आज बिहान १०ः३० बजेबाट सडक सञ्चालनमा आएको छ । बुधबार अपराह्न ३ः२५ बजे पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको सडकको…
मुग्लिन सडकको चारकिलोमा सुक्खा पहिरो, यातायात अवरुद्ध
रत्ननगर (चितवन), २८ असार । चितवनको नारायणगढ मुग्लिन सडकको चारकिलो भन्ने स्थानमा सुक्खा पहिरो खसेर यातायात अवरुद्ध भएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिकाको वडा नं ६ स्थित कालिखोला नजिकै रहेको चारकिलोमा…
काठमाडौँ, २८ असार । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्राधिकरण निर्देशक समितिको आजको बैठकले भूकम्पले भत्किएका संरचना पुनःनिर्माणका लागि रु…
काठमाडौँ, २८ असार । अवैध रुपमा चीन पठाउन खोजिँदा बरामद भएको दुई लाख १० हजार १२० किलोग्राम रक्तचन्दन काठ समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सड्ने अवस्थामा पुगेको छ । विभिन्न…
काठमाडौँ, २८ असार । सम्झौता भएको एक वर्ष बितिसक्दासम्म काम अघि नबढाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ भ्यू टावर निर्माता कम्पनीसँगको बोलपत्र रद्द गर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौँ भ्यू…
साउन १ गतेदेखि दशलाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्दा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने
काठमाडौँ, २७ असार । नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा ४४ ग को उपदाफा १ अनुसार प्रचलित करसम्बन्धी कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक…
बनियानी (झापा), २६ असार । सरकारले युवालाई व्यवसायी तथा उद्यमी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको स्वरोजगार कोषमार्फत झापामा यो पटक रु २५ करोड लगानी गरिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको…
इलाम, २६ असार । इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका–५ जमुना–३ सुलुबुङको बीचमा भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको अपरमाई ‘सी’ हाइड्रोपावर लिमिटेडले विद्युत् उत्पादन सुरू गरेको छ । अढाइ वर्षअघि निर्माण सुरू भएको अपरमाईको…
लहान, २४ असार । सहकारी डिभिजन कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा ११७ वटा नयाँ सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । चालु आवमा सिरहामा ५८ र सप्तरीमा ५९ वटा नयाँ सहकारी संस्था…
नयाँ र पुराना मुद्रा अङ्कित टिकट प्रदर्शनी हुने
काठमाडौँ, २२ असार । नेपाल फिलाटेलिक सोसाइटीले बैंक नोटको विगतदेखि वर्तमानसम्मको परिचय दिने उद्देश्यले मुलुकमा हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएका मुद्रा तथा कागजी नोट र हुलाक टिकट सङ्कलन गरेको छ । सोसाइटीको…
काठमाडौँ, २१ असार । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा केही भइहाले आफू र घरपरिवारले राहत पाउने आशासहित कामदार विदेश जानुअघि जीवन बीमा र कामदार कल्याणकारी कोषमा रकम तिरेर जाने गर्छन् । रामेछापको…
काठमाडौँ, २१ असार । उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको मिति दुवै मुलुकका सम्बन्धित दूतावासको छलफलपछि तय हुने बताउनुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् बैठकलाई उहाँले आफ्नो भारत भ्रमणका बेला…
बेँसीसहर(लमजुङ), २० असार । भूकम्पपीडितको रकम बैंकले काटेको खुलेको छ । भूकम्प प्रभावितलाई बैंक खातामार्फत अनुदान वितरणका क्रममा रकम कट्टा भएको भूकम्पपीडितले गुनासो गरेका छन् । मध्यनेपाल नगरपालिकाअन्तर्गतका भूकम्पपीडितलाई रकम…
कालीखोला (चितवन), १५ असार । काठमाडौँको ‘लाइफलाइन’का रुपमा रहेको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड निर्माणमा चरम लापर्वाही भएको पाइएको छ । निर्माण कम्पनीले यो वा त्यो बहाना बनाई सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्नाले त्यसको…
लमजुङ (बेसीसहर), १४ असार । लमजुङमा सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा नहुँदा समस्या भएको छ । आव २०७३/७४ अन्तिम चौमासिक भत्ता जिल्ला समन्वय समितिबाट निकासा नहुँदा समस्या भएको…
काठमाडौँ, १४ असार । काठमाडौँमा ४० हजार घरेलु श्रमिक रहेका छन् । स्वतन्त्रता अभियान नेपालले दिएको जानकारीअनुसार डिस्को, बार, होटल, रेस्टुराँलगायतमा सो परिमाणमा घरेलु श्रमिक रहेका छन् । बेरोजगार अशिक्षालगायत…
काठमाडौँ, १३ असार । काठमाडौँ महानगरपालिकाले साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पूरक सम्झौताअनुरुप पुनः रु पाँच करोड उपलब्ध गराएको छ । स्मार्ट सिटी अभियानअन्तर्गत सार्वजनिक यातायातलाई सुधार गर्ने क्रममा सो…
लमजुङ (बेँसीसहर) १३ असार । लमजुङमा विद्युत् बढी भएर समस्या भएको छ । वर्षाका कारण पानीको बहाव बढेसँगै जिल्लामा रहेका सबै जलविद्युत् केन्द्रले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न थालेपछि समस्या…
काठमाडौँ, १२ असार । काठमाडौँ उपत्यकालाई उज्यालो बनाउने लक्ष्यका साथ काठमाडौँ महानगरपालिका र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा धमाधम सौर्य बत्ती जडान भइरहेको छ । यही महिनाको अन्त्यसम्म एक हजार २८५ वटा…
चितवन, ११ असार । रातको समयमा पहिरो खसेर जनधनको क्षति बढेकाले नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा रातको समयमा आवागमन रोक्ने तयारी भएको छ । शुक्रबार बिहान पहिरो पन्छाउन गएको प्रहरीको भ्यानसहित चारजना पहिरोमा…
काठमाडौँ, ९ असार । काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी सौन्दर्य बिगार्ने प्रमुख कारकका रुपमा रहेका विद्युतीय संरचना क्रमशः भूमिगत हुने भएका छन् । सरकारले सहरी सौन्दर्य बढाउने र विद्युतीय संरचनालाई क्रमशः भूमिगत…
काठमाडौँ, ८ असार । आगामी आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विज्ञापन कर उठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ । काठमाडौँको विज्ञापन कर हालसम्म महानगरपालिकाले उठाउँदै आएकामा आगामी साउन १ गतेदेखि…
काठमाडौँ, ८ असार । विश्व बैंकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई रु १९ अर्ब पाँच लाख ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी पाँच वर्षका लागि…
पाँच अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
पोखरा, ७ असार । आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा रु पाँच अर्ब ७८ करोड २२ लाख ५७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले आयकरतर्फ…
काठमाडौँ, ७ असार । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन २४ दिन मात्र बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतमा सीमित रहेकामा सरकार, नेपालका विकासका साझेदार र अर्थशास्त्रीले गम्भीर चिन्ता र चासो…
चितवन, ६ असार । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरले गत आवको जेठ मसान्तसम्ममा सङ्कलन गरेको राजस्वभन्दा चालु आवको सोही अवधिमा रु चार अर्ब ३३ करोड दुई लाख ६७ हजार बढी राजस्व…
काठमाडौँ, ५ असार । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले नेपालका विभिन्न छवटा परियोजनामा ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने भएकोे छ । दक्षिण कोरियाको जेजुमा यही असार २ देखि ४ गतेसम्म आयोजना भएको…
चितवन, ५ असार । रामपुरस्थित राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमको अनुसन्धानबाट थोरै जमिनमा बढी उत्पादन लिन सकिने भएपछि तराई र भित्री मधेस अहिले हाइब्रिड जातको मकै उत्पादनमा केन्द्रित छ । विसं…
बनेपा, ५ असार । काभ्रेपलाञ्चोकका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा दूध उत्पादनको क्षेत्रमा काम गरेका एक दर्जन सहकारी संस्थाले अनुदानबापत कुल रु ३१ लाख ८९ हजार ९५७ पाउने भएका छन् ।…
काठमाडौँ, ४ असार । ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको खोजी गर्ने क्रममा सरकारले पछिल्लो दिन बायोमासमा पनि प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने घोषणा गरेपछि दुईवटा कम्पनीले लगानीका लागि चासो देखाएका छन् । सौर्य,…
काठमाडौँ, ४ असार । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा नघट्ने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ रु पाँचभन्दा कम नभएकाले वैज्ञानिक भाडा पद्धतिअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा नघट्ने…
काठमाडौँ, ४ असार । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरु फेरि विदेसिनु भन्दा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आजदेखि ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि) सुरु गरिएको छ । नेपाल सरकार र…
रसुवा, ४ असार । उत्तरी रसुवाको चिलिमे क्षेत्रमा निर्माणाधीन माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य ५० प्रतिशत बढी काम पूरा भएको छ । साञ्जेन माथिल्लो जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख सुदनसिंह महतका…
काठमाडौँ, २ असार । काठमाडाैँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको एक महिनामात्र बाँकी रहँदा लक्ष्यभन्दा रु एक करोड ५५ लाख बढी विज्ञापन कर सङ्कलन गरेको छ । चालु वर्षका लागि विनापन…
सुरुङ्गा (झापा), १ असार । झापामा बर्सेनि मकैको उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको छ । मकैखेतीका लागि हावापानी अनुकूल र उन्नत जातका बीउ प्रयोग गरेसँगै मकै उत्पादनमा वृद्धि हुँदै गएको हो…
चौतारा, १ असार । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काममा सुस्तता आएकाले निर्धारित समयभित्र पूरा नहुने भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बू गाउँपालिकास्थित अम्बाथान मुहानदेखि सुन्दरीजलसम्मको २७.५ किमी सुरुङमध्ये तीन…
सुरुङ्गा (झापा), ३० जेठ । समुदायमा आधारित धान सुपरजोन कृषि आधुनिकीकरण परियोजना यस वर्षबाट जिल्लामा सञ्चालन भएको छ । जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा धान सुपरजोन परियोजना सञ्चालन गरिएको हो । पृथ्वीनगर,…
काठमाडौँ, २९ जेठ । अधिकांश महिला पारिश्रमिक पाउने रोजगारी चाहन्छन् तर उनीहरूको रोजगारीमा प्रगति सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक दुवै रूपमा अहिले मन्द छ र केही स्थानमा पूर्ण रूपमा रोकिएको छ ।…
सोलुखुम्बु, २९ जेठ । कुल ८६ मेगावाट क्षमताको सोलुखोला–दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक साहस ऊर्जा लिमिटेडले इटालीको निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । साहस ऊर्जा लिमिटेडले सोलुखोला–दूधकोसी आयोजना इटालियन व्यवसायी…
दमक, २८ जेठ । झापाको दमकस्थित मेची सहकारी संस्थाका २८ सदस्यले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । संस्थामा आबद्ध सञ्चालक समिति तथा सेयर सदस्य विभिन्न पार्टीका तर्फबाट…
पथरी (मोरङ), २८ जेठ । मोरङको डाइनियाको प्रगति टोलका २४ वर्षीय ललन सरदार निकै मख्ख हुनुहुन्छ । सरदार नयाँ घर बनाउन सरकारले खर्च दिने भएपछि मख्ख हुनुभएको हो । डाइनियामात्रै…
काठमाडौँ, २६ जेठ । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिच्छ्याउने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । उपत्यकावासीलाई असोजभित्र खानेपानी खुवाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । उपत्यकाभित्र…
काठमाडौँ, २६ जेठ । नबिल बैंकले एशोसिएशन अफ सेन्ट मेरिज एल्मुनाई नेपाल (ASMAN) सँग सहकार्य गरी बेबी लाईफ होम कीर्तिपुरलाई १ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको खाने कुरा, स्टेशनरी तथा…
मेलम्ची आयोजना: स्थानीयवासीको आफ्नै पीडा
मेलम्ची, २६ जेठ । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौँवासीका लागि उत्साहको विषय बने पनि स्थानीयवासीको आफ्नै पीडा छ । आयोजनाको हेलम्बु गाउँपालिका–१ अम्बाथान सुरुङ प्रवेशद्वार नजिकैका स्थानीयलाई सुरुङ निर्माणका क्रममा…
काठमाडौँ, २६ जेठ । चालु आर्थिक वर्षको दश महिनासम्ममा नगद प्रवाहमा आधारित बजेट रु ५९ अर्ब ९१ करोड बचतमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मुलुकको पछिल्लो आर्थिक…
बुटवल, २५ जेठ । गैरसरकारी संस्था स्थापना गरी कार्यालय सञ्चालनको नाममा नक्कली नोट छाप्ने एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी आज यहाँ सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरीले पक्राउ गरेका ती युवकबाट…
काठमाडौँ, २४ जेठ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चालु आर्थिक वर्षको जेठ १५ गतेसम्म रु ३० करोड ३० लाख ५२ हजार ९०० राजस्व सङ्कलन गरेको छ । महाशाखाले उपत्यकामा अवैध…
काठमाडौँ, २३ जेठ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ पक्षले ऋण उपलब्ध गराएको छ । ऋणदाता निकाय चिनियाँ आयातनिर्यात बैंकले ऋण रकम उपलब्ध…
जेब्रा क्रसिङ्ग मर्मतमा यती बैंककोे सहयोग
काठमाडौँ, २२ जेठ । यती डेभलपमेण्ट बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने तथा सामाजिक कार्यहरुमा सहयोग गर्दै आइरहेका बिभिन्न संघ संस्थालाई सहयोग गर्ने जस्ता कार्यहरु बिगत…
सिभिल बैंकको अगुवाईमा अपर सानीगाड हाइड्रो इलेक्ट्रिकमा लगानी
काठमाडौँ, २२ जेठ । बझाङ जिल्लामा निर्माण हुन लागेको १०.७ मेगावाट क्षमताको अपर सानीगाड इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टमा सिभिल बैंकको अगुवाईमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, प्रभु बैंक र लक्ष्मी बैंकले लगानी गर्ने सम्झौता…
काठमाडौँ, २१ जेठ । नयाँ बजेटले वैदेशिक रोजगारको विषयलाई प्राथमिकतामा राखे पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको समस्या समाधानको विषय भने समावेश हुन सकेन । खासगरी विगत तीन वर्षदेखि नीति तथा…
काठमाडौँ, २१ जेठ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय र चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप एन्ड कम्पनी (सिजिजिसी)बीच प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ…
बाबियाचौर (म्याग्दी), २१ जेठ । धौलागिरि र मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीमा ५३दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने भएको छ । हिमालयन इन्फ्रास्टक्चर फन्ड लिमिटेडले…
काठमाडौँ, २१ जेठ । नेपालमा पाँच अर्बसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभागबाट स्वीकृत हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा रु…
काठमाडौँ, १८ जेठ । नेपाल हिमालको प्रवेशद्वार हो भन्ने सन्देश विश्व पर्यटन बजारमा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन ‘इन्टरनेसनल ट्राभल ब्लगर्स एन्ड मिडिया कन्फ्रेन्स’ आयोजना गरियो । ‘नेपाल…
बजेट प्रतिक्रिया: शीघ्र पर्यटकीय पूर्वाधार बन्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव
काठमाडौँ, १६ जेठ । पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएर ल्याइएको आव २०७४/७५ को बजेटप्रति पर्यटन व्यवसायीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । पर्यटनको…
बाबियाचौर (म्याग्दी), १६ जेठ । जिल्लामा ३०८ मेगावाट क्षमताका एघार जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । विद्युत् विकास विभागका अनुसार १४४ मेगावाट क्षमताका सातवटा आयोजनाले पूर्वाधार निर्माणको अनुमति पाएका छन्…
काठमाडौँ, १५ जेठ । नेपालमा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ५८ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको सर्वेक्षणमा शौचालय भएको घर परिवारको सङ्ख्या ८८दशमलव दुई…
हावाहुरीले चारसय बिघाको बाली नष्ट
बनियानी (झापा), ५ जेठ । गत जेठ १ गते आएको हावाहुरीका कारण झापामा चार सयभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको बाली नष्ट भएको छ । जिल्ला कृषि कार्यालय झापाले २५० बिघा चैते…
काठमाडौँ, २९ वैशाख । नेपालले चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा आज हस्ताक्षर गरेको छ । शुक्रबार बिहान परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा नेपालका तर्पmबाट परराष्ट्र…
योकोहामा (जापान), २० वैशाख । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालका साना सहरमा स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउने घोषणा गरेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका विकासोन्मुख १६…
काठमाडौँ, १५ वैशाख । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको गरिबी घटाउने र भौतिक पूर्वाधारको निर्माणबाट यस क्षेत्रलाई समृद्धिको दिशामा उन्मुख गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको एसियाली विकास बैंक (एडिबी) पचासौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ…
काठमाडौँ, १२ वैशाख । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफूले पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मा पाएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सात हजार आवासमध्ये पाँच सय ६८ आवास निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र…
इलामको जोगमाई खोलाबाट ७.५ मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरु
इलाम, ५ वैशाख । सान्भी इनर्जी प्रा.लि.ले इलाम जिल्लाको नामसालिङ र नयाँ बजार गाविसमा पर्ने जोगमाई खोलाबाट उत्पादित ७.५ मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरु गरेको छ । उत्पादित उक्त विद्युत काबेली…
पाँच मेगावटको तल्लो तादी खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु
नुवाकोट, ५ वैशाख । नुवाकोटमा ५ मेगावाटको तल्लो तादी खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु भएको छ । बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर प्रा.लि.ले ९८ करोड रुपैयाँको अनुमानित रकममा निर्माण गर्न लागेको…
खोटाङ, ३० चैत । भूकम्प गएको करिब दुई वर्षपछि खोटाङमा आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गर्न सुरु गरिएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवास निर्माणका लागि मङ्गलबारदेखि रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाबाट सम्झौता…
गोरखा, ३० चैत । निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका गोरखाका २४ घरधनीलाई तेस्रो किस्ताको रकम उपलब्ध गराइएको छ । भूकम्पले क्षति पुगेका ७० हजारवटा नयाँ घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने भए पनि…
काठमाडौँ, २९ चैत । सरकारले ७४४ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालय खोल्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले नयाँ प्रावधानअनुसार स्थानीय तहको संरचना खडा गरेको…
राष्ट्रपतिद्वारा घरजग्गा मेला–२०७३ को उद्घाटन
काठमाडौँ, २५ चैत । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘छैटौँ घरजग्गा मेला–२०७३’ को आज भृकुटीमण्डपमा एक समारोहबीच उद्घाटन गर्नुभयो । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास सङ्घले आयोजना गरेको सो मेलामा सुरक्षित एवम्…
काठमाडौँ, २५ चैत । हुलाक सेवा विभागले विदेशबाट पठाएको पैसा हुलाकीमार्फत घरघरमा पुरयाउने भएको छ । “विदेशबाट नेपालीले पठाएको जति पनि रकम हुन्छ, हुलाकमार्फत त्यसलाई उनीहरूको घरघरमा वा आफन्तसम्म पुरयाइन्छ,”…
नक्साअनुरुप घर निर्माण र भाडामा दिएको/नदिएको जानकारी लिन युवा परिचालन गरिने
काठमाडौँ, २४ चैत । महानगरभित्र रहेका सम्पूर्ण घरको जानकारी लिनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक हजार युवा परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरभित्र रहेको सबै घरको घर नक्साअनुरुप निर्माण भएको…
धनुषा, २२ चैत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले धनुषाबाट एक कर्मचारीलाई घुसको रकमसहित पक्राउ गरेको छ । जग्गाको सर्वेक्षण पासका लागि सेवाग्राहीसँग रु २२ हजार घुस लिएको रकमसहित नापी…
पोखरा, २२ चैत । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले दुई वर्षअघि गएको भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ जिल्लाका लाभग्राहीसँगको अनुदान सम्झौता सोमबार कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकास्थित लुम्लेबाट शुभारम्भ गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख…
फलेवास (पर्वत), २१ चैत । ऊर्जा नदीका रूपमा परिचित मोदीखोलासहित पर्वतका अन्य नदीनालामा सम्पन्न भइसकेका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट ७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदैछ । जिल्लाका मोदीखोला र पातीखोलामा गरी…
बाबियाचौर (म्याग्दी), २१ चैत । म्याग्दी जिल्लामा यस वर्ष रु पाँच करोडभन्दा बढीको लागतमा नौ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिमार्फत निर्माण सुरु भएका झोलुङ््गे…
महानगर सुधारका लागि तीस बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक
काठमाडौँ, १८ चैत । काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्काल सुधार गर्नेगरी ३० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । काठमार्डाैँ महानगरपालिकाले यहाँ आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले…
२०७३ को हाइड्रो नेपाल एक्सिलेन्स अवार्ड कुलमान घिसिङलाई र लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड डा. हरिमान श्रेष्ठलाई
काठमाडौँ, १७ चैत । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मुलुकमा लोडसेडिङमुक्त गर्नको लागि आफ्नो उच्चतम प्राविधिक ज्ञान तथा उत्तम व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गरेकोमा उहाँको योगदानको कदर गर्दै हाइड्रो…
चौतारा, १७ चैत । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्ग खन्न अब ४.१ किमीमात्र बाँकी रहेको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुको अम्बाथान मुहानदेखि सुन्दरीजलसम्मको २७.५ किमी सुरुङमध्ये अब ४.१ किमीमात्र बाँकी…
धनुषा, १७ चैत । एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालित जनकपुरको एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिन लागिएको सडकमा ठेकेदारले नाला निर्माणका लागि बाटो खनेर जथाभावी छाडिदिएका कारण…
तम्घास (गुल्मी), १७ चैत । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम छ महिना बित्दासम्म पनि गुल्मीका वृद्धवृद्धाले अझै पाउन सकेका छैनन् । सरकारले दिँदै आएको भत्ता रकम समयमा नपाएका कारण यहाँका वृद्धवृद्धाले…
सडकबत्तीको बक्यौता रु तीन करोड नाघ्यो
पाल्पा, १७ चैत । विद्युत् प्राधिकरण, पाल्पाले तानसेन नगरपालिकाभित्रका सडक बत्तीबापतको रु तीन करोड ५० लाख ४२ हजार बक्यौता उठ्न अझै बाँकी रहेको जनाएको छ । तानसेन नगरपालिकाभित्रका सडक बत्तीको…
मालपोत प्रमुखलाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिई जिप्रकामा बुझाए
पोखरिया (पर्सा), १६ चैत । वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–२ का स्थानीयले मालपोत कार्यालय, पर्साका कार्यालय प्रमुख प्रकाश पोख्रेललाई नियन्त्रणमा लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका छन् । कार्यालय प्रमुख पोख्रेलले बिहान ९ बजे…
पोखरा, १५ चैत । पोखरा पर्यटन परिषद्को सोमबार यहाँ आयोजित नवौँ अधिवेशन एवम् १६औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहका वक्ताले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पर्यटनको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिएका छन् ।…
काठमाडौँ, १५ चैत । नेपाल र भारतबीच इन्धन आपूर्ति गर्नेसम्बन्धी सम्झौता पाँच वर्षका लागि नवीकरण भएको छ । आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा र भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको उपस्थितिमा…
पर्सा, १४ चैत । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । यहाँको नाका प्रयोग गरी नेपालका लागि हुने सवारी साधन आयातमा कमी आएका कारण राजस्व सङ्कलन घटेको कार्यालय…
सरकारी स्रोतबाटै सुरुङ मार्ग र ‘फ्लाइ ओभर’ निर्माणको कार्यक्रम ल्याइने
काठमाडौँ, १४ चैत । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नै स्रोतबाट सुरुङ मार्ग र ‘फ्लाइ ओभर’ निर्माणको योजना ल्याउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार…
काठमाडौँ, १३ चैत । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन, अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ प्रति सञ्चारकर्मी तथा सरोकार राख्ने सङ्घसंस्थाले असन्तुष्टि जनाएका छन्…
काठमाडौँ, १० चैत । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको सीप परीक्षण गरी त्यसका आधारमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले योग्यताको प्रमाणपत्र दिनुपर्नेमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन्…
काठमाडौँ, १० चैत । चीनले विश्व शान्ति र समृद्धिका लागि अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ विश्वका सबै मुलुकको हितमा रहेकाले त्यसमा आबद्ध हुन नेपाललाई चिनियाँ बौद्धिक समूहले आग्रह गरेको…
काठमाडौँ, ९ चैत । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासको बाहक ऊर्जा क्षेत्र नै भएकाले त्यसैको विकासका लागि वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ । अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित, विकासोन्मुख तथा विकासोन्मुख…
वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी विधेयक बहुमतले स्वीकृत
काठमाडौँ, ८ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्ले ‘वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकमाथि…
मुसहर बस्ती निर्माण गर्न रु एक करोड अभाव
महोत्तरी, ८ चैत । बर्दिवासमा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्माणाधीन एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती निर्माणका लागि रु एक करोडभन्दा बढी रकमको अभाव देखिएको छ । साबिक बर्दिबास नगरपालिका– २ ( हाल…
चितवन, ८ चैत । वर्षात्को समयअघि नै नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको भित्तो काट्ने काम सम्पन्न गर्न दैनिक सवारी आवागमन छ घन्टा रोकिने भएको छ । हाल बिहान १०ः३० बजेदेखि अपराह्न ३…
काठमाडौँ, ८ चैत । दक्षिण कोरिया सरकारले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा जलवायु परिवर्तन भइरहेको र हरित ऊर्जामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको…
काठमाडौँ, ६ चैत । सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिले व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ उपसमितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘सहकारी विधेयक’ चाँडो ल्याउन माग गर्दै आज माइतीघरमा धर्ना दिएको छ । विभिन्न सहकारीबाट ठगिएका पीडितले…
तीन दशकपछि नेपाल ‘वृद्ध उमेरको समाज’
काठमाडौँ, ४ चैत । नेपालमा तीव्र गतिमा भइरहेको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनका कारण ‘ढल्दो उमेरको समाज’ हुँदै आगामी तीन दशकमा मुलुक ‘वृद्ध समाज’ मा रुपान्तरण हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको…
साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न माग
रसुवा, ४ चैत । निर्माणाधीन साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न यहाँका बासिन्दाले माग गरेका छन् । निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन समुदायस्तरको समिति समेत गठन भएको छ । सो आयोजना…
काठमाडौँ, ३ चैत । कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहलाई दिने सरकारी तयारी भइरहेको छ । हालै स्थापना भएका ७४४ स्थानीय तहलाई नै सम्पूर्ण रुपमा खर्च गर्न पाउने…
मुलुकभर नै विद्युत्भार कटौती (लोडसेडिङ) हट्यो
काठमाडौँ, ३ चैत । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माध्यामिक शिक्षा परीक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मुलुकभर नै विद्युत्भार कटौती पूर्णरुपमा अन्त्य गरेको छ । विगत तीनदिनदेखि परीक्षणका रुपमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरेको भए…
काठमाडौँ, २ चैत । नेपाल सरकारले २०७४ साल बैशाख १ गतेदेखि सवारीसाधनमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ लागू गर्ने भएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को तेस्रो संशोधनको नियम…
काठमाडौँ, १ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्ले कम्पनी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७३ बहुमतले पारित गरेको छ । त्यसअघि बैठकमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले ‘उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदन सहितको कम्पनी…
नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु
भक्तपुर, ३० फागुन । यातायात व्यवस्था विभाग भक्तपुर जगाती कार्यालयले आजदेखि नयाँ ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ अर्थात् सवारी चालक प्रमाणपत्र वितरण सुरु गरेको छ । कार्यालयले गत माघ २ गतेदेखि कार्यालय सञ्चालन…
त्रिशूली, २९ फागुन । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममार्फत नुवाकोटको २० हजार घुरधुरीलाई सोलार बत्ती वितरण गरिएको छ । साविकको जिल्ला विकास समिति र रेडक्रस…
मेलम्ची, २९ फागुन । भूकम्प गएको २३ महिना बितिसक्दा पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका भूकम्पपीडित दोस्रो किस्ताको विषयमा अझै अनभिज्ञ छन् । नाम छुटेका पीडितले अहिलेसम्म पहिलो किस्तासमेत पाउन सकेका छैनन् ।…
भारी हिमपातबाट डोल्पाको जुफाल विमानस्थल ठप्प
दुनै (डोल्पा), २७ फागुन । भारी वर्षासँगैको हिमपातले जुफाल विमानस्थलमा हवाइसेवा ठप्प भएको छ । आज बिहानदेखि नै जिल्लाभर सुरु भएको भारी हिमपात अझै जारी छ । विमानस्थलमा नेपालगन्जबाट हुने…
हिमपातले ढाक्यो कर्णाली, जनजीवन प्रभावित
जुम्ला, २७ फागुन । एकसातादेखि मौसममा बदली भई चिसो बढ्दै जाँदा भएको भारी हिमपातले कर्णाली पुनः ढाँकिएको छ । हिमपातले सबैभन्दा यहाँका बालबालिका, महिला, वृद्ध, अशक्त अपाङ्गलाई बढी समस्या परेको…
सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसः महिला समानताका लागि आर्थिक उन्नति
काठमाडौँ, २५ फागुन । समान कामको समान ज्याला हुनुपर्ने आवाज बुलन्द पार्न सुरु गरेको १०७ वर्ष बितिसक्दा पनि महिलाले अझै पनि समान श्रमको समान ज्याला पाउन सकेका छैनन् । संयुक्त…
सिन्धुली, २४ फागुन । ठाडोकुलो फाँट सिँचाइ योजना सम्पन्न भएपछि कमलामाई नगरपालिका–५ मा २९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिञ्चित भएको छ । नेपाल सरकार, स्विस सरकारको सहयोग र स्थानीयवासीको जनसहभागितामा कुलो…
दोस्रो किस्ता बापतको रकम नपाउँदा सास्ती
बनेपा, २४ फागुन । काभ्रेपलाञ्चोकमा पुनःनिर्माणको काम गरिरहेका भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ता बापतको रकम नपाउँदा सास्ती खेप्नुपरेको छ । “पुनःनिर्माणका लागि काम गरिरहेका छाँै तर सरकारले दिने भनेको किस्ता समयमै नपाउँदा…
लगानीलाई सही ठाउँमा उपयोग गर्न चार समिति गठन
काठमाडौँ, २३ फागुन । उद्योग मन्त्रालयले लगानी सम्मेलनबाट लगानीकर्ताले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न चार समिति गठन गरेको छ । सम्मेलन फागुन १९ र २० गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो ।…
दम्गाडे (धादिङ), २३ फागुन । भूकम्पको २३ महिनापछि मात्र धादिङको उत्तरी भेगस्थित री, लावा र तिप्लिङ गाविसका पीडितले जस्ताको टहरामा बस्न पाएका छन् । भूकम्पपछि जिल्लाको उत्तरी भाग पहिरोको उच्च…
राजनैतिक दल र उम्मेदवारले बैंक खाता खोल्नु पर्ने
काठमाडौँ, २३ फागुन । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता पहिलो संशोधन २०७३ को दफा ५ (ग) ले राजनैतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनको लागि बैंक तथा…
काठमाडौँ २२ फागुन । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले मेलम्चीको पानी चक्रपथभित्र तथा बाहिर पनि वितरण गर्ने जनाएको छ । सो लिमिटेडको पाँचौँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा महाप्रबन्धक डा महेशप्रसाद भट्टराईले…
कोहलपुर (बाँके), २२ फागुन । फुसको छानो, परालको भित्ता, परालकै ओछ्यान चाहे वर्षायाम होस् या हिउँदको उखरमाउलो गर्मी यही ६५ वसन्त पार गर्नुभएका बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२३ इन्द्रपुरगाउँका पट्टबारी कुशबंधिया सरकारले…
वालिङ, २२ फागुन । स्याङ्जाको माझकोट शिवालय गाविसको बुढाकोटमा सौर्य लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको निर्माण थालिएको छ । नेपाल सरकार र फिनल्यान्ड सरकारको संयुक्त लगानीमा माझकोट शिवालय सौर्य लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको…
काठमाडौँ, २१ फागुन । दार्चुलाको शिखर गाविस बलाँचमा निर्माणाधीन ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङको सबै काम सम्पन्न भएको छ । प्राकृतिक कारणले खुम्चिएको आयोजनाको ८४३ मिटर लामो सुरुङ…
रसुवा, २१ फागुन । रसुवागढी–केरुङ नाकाको मितेरीपुलबाट पारितर्फ चीनको विशाल अध्यागमन कार्यालयको रौनकता र वारितर्फ नेपालमा टिनको छानोमा नेपाल प्रहरी र त्रिपालमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयले नेपालको अस्तव्यस्तताको प्रतिबिम्ब…
अडिटर्स एसोसिएसनद्वारा स्थानीय तह निर्वाचनको स्वागत गर्दै एघारबुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी
पोखरा, २१ फागुन । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) ले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको सरकारी निर्णयलाई स्वागत गर्दै निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न माग गरेको छ । पोखरामा आज सम्पन्न…
लगानी सम्मेलन सम्पन्न, करिब १४ खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ, २० फागुन । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले राजधानीमा आयोजित दुईदिने ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ करिब रु १४ खर्बको (१३.५२ विलिएन अमेरिकी डलर) लगानी प्रतिबद्धतासहित सकिएको छ । सम्मेलनको समापनका अवसरमा…
दश करोड डलर ऋण स्वीकृत
काठमाडौँ, २० फागुन । विश्व बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा बैकिङ क्षेत्रका जोखिम घटाउन नेपाल सरकारलाई दश करोड अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको मध्यकालीन वित्तीय क्षेत्र…
चितवन जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू
रत्ननगर (चितवन), २० फागुन । चितवन जिल्लामा यो वर्षबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार यसपालिदेखि लागू भएको बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले दर्ता सहयोगी छनोटको…
सप्तरी, २० फागुन । राजविराज विमानस्थल निर्माण हुने म्याद आगामी मङ्सिरसम्म रहे पनि असारभित्रै तयार हुने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले बिहीबार राजविराज विमानस्थलकै सभाहलमा आयोजना…
चितवन, २० फागुन । लक्ष्यअनुरुप काम हुन नसक्दा नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड विस्तारमा थप एक वर्ष लाग्ने भएको छ । सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले आगामी अप्रिल महिनासम्ममा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेे भए पनि हालसम्म…
काठमाडौँ, १९ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको र यसको उपयुक्त वातावरण बनाउन सबैको एकमत रहेको बताउनुभएको छ । ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’को…
इलाम, १९ फागुन । बढ्दो आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै हुलाकमा चिठ्ठीपत्र आदानप्रदान हुन छाडेपछि जिल्ला हुलाक कार्यालय इलामले बैंङ्किङ सेवा दिन थालेको छ । जिल्ला हुलाक कार्यालयअनुसार हुलाकले प्रदान गरेको बैङ्किङ…
काठमाडौँ, १८ फागुन । राष्ट्र«पति विद्यादेवी भण्डारीले वृद्धवृद्धाका लागि छोराछोरीले आम्दानीको १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने कानुन तर्जुमा हुन लागेको बताउनुभएको छ । मनमोहन प्रतिष्ठानले आज राष्ट्र«पति निवासमा आयोजना गरेको ज्येष्ठ नागरिक…
बोर्डद्वारा पुँजी वृद्धिको अनुमति
काठमाडौँ, १८ फागुन । उद्योग मन्त्रालयले विभिन्न उद्योगको पुँजी वृद्धि गर्ने तथा उद्योग सञ्चालनको म्याद थप्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्न कानुनी राय माग्ने निर्णय गरेको छ । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको…
काठमाडौँ, १८ फागुन । नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएका नौ क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन राजधानीमा भोलिदेखि ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ हुँदैछ । सम्मेलनमा ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय…
काठमाडौँ, १८ फागुन । हङ्गेरीले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि (१०० मिलियन युरो) करिब रु ११ अर्ब २० करोड ऋण सहयोग एक प्रतिशत भन्दा कम ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।…
पाँचथरमा चार झोलुङ्गे र तीन ट्रसपुल बन्ने
पाँचथर, १८ फागुन । पाँचथरमा यस वर्ष चार झोलुङ्गे र तीनवटा ट्रस पुल बन्ने भएका छन् । जिविसका इन्जिनियर प्रेम काफ्लेका अनुसार चिगरुप, सिस्ने, कान्दाङ, नाम्धु दोबान, झोलुङ्गे पुल, डडुवा,…
काठमाडौँ, १४ फागुन । सप्तरीका कालिचरण साहले पाँच वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदीअरब पुग्दा दुई वर्षपछि नेपाल फर्किहाल्छु भन्ने सोच्नुभएको थियो । साउदीमा श्रम स्वीकृतिको अवधि दुई वर्ष मात्रै भएकाले…
पोखरा, १३ फागुन । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कास्कीले सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालक र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने चालकलाई कारबाही गरी चालु आवको सात महिनामा रु दुई…
विराटनगर, १३ फागुन । मोरङमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले साना सिँचाइ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आवमा ४५ वटा योजनामा रु ३६ लाख रकम किसानलाई…
काभ्रे, ११ फागुन । महादेवस्थान नगरपालिका– ७ कुन्ताका रामप्यारी राई दनुवारले भूकम्पपछि ऋण गरेर श्रीमान्को मुटुको शल्यक्रिया गराउनुभयो । भूकम्पबाट घाइते सासूको उपचार जारी छ । भएको सम्पत्ति श्रीमान् र…
काठमाडौँ, १० फागुन । व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७३ लाई हिजो संशोधनसहित स्वीकृत गरेको छ । समितिको आजको…
आर्थिक वर्षको छ महिना बितिसक्दा २६ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च
काठमाडौँ, ९ फागुन । सरकारले प्रथम छ महिनामा कुल रु दुई खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड ५१ लाख अर्थात् कुल बजेटको २६.१९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ ।…
वीरगन्ज, ९ फागुन । रक्सौल परवानीपुर १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण पुरा भएको छ । भारतको रक्सौलदेखि परवानीपुरसम्म रहेको सो प्रसारणलाइनको टावर, तार तथा अन्य उपकरण जडानकोे अन्तिम जाँच…
वन अनुसन्धान रणनीति, २०७३ सार्वजनिक
काठमाडौँ, ८ फागुन । वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री शङ्कर भण्डारीले वन क्षेत्रलाई जनताको जीविकोपार्जनसँग जोडेर राष्ट्रिय उत्पादनको मूल आधार बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । वन विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘राष्ट्रिय वन संवर्द्धन…
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच सय ५० घर निर्माण हुँदै
धनगढी, ८ फागुन । सीमान्तकृत र विपन्न समुदायको बसोवासका लागि ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यसवर्ष कैलाली जिल्लामा ५सय ५० वटा घर निर्माण हुने भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि…
काठमाडौँ, ५ फागुन । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रु एक करोड २४ लाख ३२ हजार मुआब्जा वितरण गर्न थालिएको छ । आयोजनाले आजदेखि मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरेको…
एक महिनादेखि मोबाइल सेवा अवरुद्ध
बैतडी, ४ फागुन । जिल्लाको कुवाकोटमा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरमा खराबी आएपछि पुरचौडी क्षेत्रका करिब एक दर्जन गाविसका स्थानीय बासिन्दा सञ्चारविहीन भएका छन् । कुवाकोट– ३ मा रहेको नेपाल टेलकमको…
काठमाडौँ, ४ फागुन । जापान सरकार पोखरामा खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना कार्यान्वयनका लागि रु चार अर्ब ५३ करोड ९० लाख अनुदान सहयोग गर्न सहमत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज…
काठमाडौँ, ४ फागुन । गत वर्षको भूकम्पले भत्किएका धरहराको पुनःनिर्माण नेपाल सरकार र नेपाल टेलिकमले संयुक्तरुपमा गर्ने भएका छन् । नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता रोमन अधिकारीले धरहरा पुनःनिर्माणको प्रस्ताव पुरातत्व विभागमा…
मुगु, २ फागुन । सरकारले कर्णालीवासीलाई जन्म र मृत्युमा २० किलो चामल दिने गरेको निर्णय आइतबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन सुरु गरेको छ । गत भदौ २३ गते कर्णाली क्षेत्रमा जन्म हँुदा…
मुलुकको आर्थिक स्थितिबारे छलफल
काठमाडाँै, २७ माघ । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अर्थ र राजस्व सचिवका साथै केन्द्रीय बैंकका गभर्नरसँग सामूहिक छलफल गर्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको…
विराटनगर, २५ माघ । कृषि तथा पशु सेवामा किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पूर्वाञ्चलमा व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । विश्व बैङ्कको अनुदानमा सञ्चालित यस कार्यक्रमका साथै…
काठमाडौँ, २५ माघ । पाँचवटा ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई साँझको समयमा मात्रै पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा विद्युत् मागलाई सहज रुपमा सम्बोधन गर्न सम्भव भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणको स्वामित्वमा…
रसुवा, २५ माघ । कादूरी नामक गैससको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा हिमनदीको पानीलाई सदुपयोग गर्दै क्याङजेन नजिक एक सय किलोवाट क्षमताको विद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । भूकम्पले प्रभावित…
काठमाडौँ, २४ माघ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा साइबर अपराधसम्बन्धी ५६० उजुरी दर्ता भएका छन् । पछिल्लो समय फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, अनलाइनलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत अपराध…
काठमाडौँ, २१ माघ । नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणाली एकीकृत हुन नसक्दा भोल्टेजलगायतका समस्या व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । खिम्ती–ढल्केबर र हेटाँैडा–कुलेखानी–मातातीर्थ प्रसारण लाइन प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोडिएपछि भोल्टेजमा…
काठमाडौँ, २१ माघ । आधुनिक प्रविधिमा आधारित पछिल्लो पुस्ताको दूरसञ्चार सेवाको अधिकतम प्रयोग हुन सकेको छैन । पछिल्लो पुस्ताको दूरसञ्चार सेवा भित्रिए पनि मुलुकका सबै क्षेत्रको एकसाथ स्तरोन्नति हुन नसक्दा…
बेनी (म्याग्दी), २१ माघ । कालीगण्डकी ऊर्जा विकास उपभोक्ता समितिको पहलमा म्याग्दी र कालीगण्डकीको सङ्गमस्थल बेनीको दोभानबाट ५०० किलोवाट क्षमताको बिजुली उत्पादन गरिएको छ । बेनी नगरपालिकाको रु ५० हजार…
गुल्मी, २० माघ । गुल्मीको मुसिकोट–६ मा रहेको हनुमानटारी फाँटमा सिँचाइ गर्न खेतका मोहीले ३५ दिन लगाएर बडिघाट नदीमा बाँध बाँधेर सिँचाइ नहर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । गत साउनमा अविरल…
काठमाडौँ, १८ माघ । भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण समस्यामा परेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको म्याद ३४ महिना थप भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको…
इलाम, १६ माघ । मावु गाविसमा निर्माण भएको अप्परमाई हाइड्रोपावर कम्पनीको क्यासकेड आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दुई महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ ६.१ मेगावाट क्षमताको…
बनियानी (झापा), १० माघ । झापाको भद्रपुरस्थित मेची पुलको पिलरको डिजाइन–रिभ्यू सडक विभागले नपठाउँदा निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । पुलका १७ पिलरमध्ये दुईवटा माटोमुनि धसाउने क्रममा केही बाङ्गिएपछि…
काठमाडौँ, १० माघ । पाँच प्रकारका घटना दर्तालाई विद्युतीय (डिजिटल) प्रविधिमा लैजान सरकारलाई विश्व बैंकले १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु १६ अर्ब ३७ करोड) ऋण सहायता प्रदान गर्ने भएको…
काठमाडौँ, १० माघ । राजधानीवासीको चासो र महत्व बोकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य पछिल्लो समयमा द्रुत ढंगबाट कार्य भइरहेको छ । अहिलेसम्म मेलम्ची आयोजना निर्माणका मेलम्ची उप आयोजना—१ अन्तर्गतले…
न्यादी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का जजियाङ हाइड्रोपावरलाई
काठमाडौँ, ४ माघ । न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले लमजुङको बाहुनडाँडा गाविसमा निर्माण गर्न लागेको ३० मेगावाट क्षमताको न्यादी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी जजियाङ हाइड्रोपावर कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्स्टलेसन कम्पनी लिमिटेडलाई दिने…
निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी बर्खास्त
काठमाडौँ, २६ पुस । सरकारको स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारीमा विभिन्न सेवा सुविधाको उपयोग गरी आफ्नो सेवा प्रवाहमा योगदान गर्न सकोस् भन्ने किसिमले राज्यले कर्मचारीका लागि छुट्याएको विदेश अध्ययन लगायतका…
काठमाडौँ, १५ पुस । माछापुच्छ्रे बैंकको अगुवाईमा ६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिखु–२ जलविद्युत आयोजनाका लागि ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् । सो आयोजना माछापुच्छ्रे बैंकसहित…
सप्तरी, १० पुस । सप्तरीको बसबिटीमा रहेको गजेन्द्रनारायण सिंह राजविराज औद्योगिक क्षेत्र लामो समयदेखि लथालिङ्ग अवस्थामा छ । करिब २२ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको सो औद्योगिक क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पर्खाल भत्किएका…
अरुण जलविद्युत् आयोजना: निजी जग्गा प्राप्ति सहज, सरकारी जटिल
सङ्खुवासभा, ७ पुस । जलविद्युत् आयोजनाका सबैभन्दा जटिल विषयको रुपमा रहेको मुआब्जा वितरण प्रक्रियाले गति लिएपछि भारतीय कम्पनीले निर्माण सुरु गर्न लागेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना मोडल आयोजनाको रुपमा अगाडि…
मन्त्रिपरिषद् बैठक– द्रुत मार्ग निर्माणका लागि कार्यदल गठन
काठमाडौँ, ७ पुस । सरकारले काठमाडौँ–तराई मधेस दु्रत मार्ग निर्माणको पूर्वाधार अध्ययनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । सो मार्ग नेपाल सरकार आफँैले…
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई रु १५ अर्ब ४० करोड ५० लाख ऋण (१६.६३ विलियन जापानी येन) सहायता उपलब्ध गराउन जापान सहमत भएको छ…
राष्ट्रपतिबाट प्रेस काउन्सिल–सानिमा बैंक राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार हस्तान्तरण
काठमाडौँ, ५ पुस । आज एक समारोहबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पाँच लाख राशीको प्रेस काउन्सिल–सानिमा बैंक राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार हस्ताक्षरण गर्नुभएको छ । मरणोपरान्त पुरस्कृत पत्रकारद्वय स्व. सञ्जय न्यौपाने र…
काठमाडौँ, ३० मङ्सिर । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । जलविद्युत् कम्पनीमध्येको उत्कृष्ट चिलिमेले आफ्ना सेयरधनीलाई गत आवको नाफाबाट कुल २० प्रतिशत लाभांश दिने…
बेनी (म्याग्दी), ३० मङ्सिर । बेनी–जोमसोम–कोरला सडकखण्डको स्तरोन्नति गरी उत्तरी नाका चीनसँग द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने सरकारी योजनाअनुसार बेनी–जोमसोम हुँदै नेपालको उत्तरी नाका कोरलासम्मको सडकको स्तरोन्नति हुने भएको छ ।…
श्रीनाथकोट (गोरखा), २८ मङ्सिर । गोरखाको श्रीनाथकोट–३ डाँडागाउँका ८१ भूकम्पपीडित घरपरिवारले भूकम्प प्रतिरोधी घर पाएका छन् । ‘कम्युनिटी चेष्ट अफ कोरिया र वेटर वल्ड’ नामक संस्थाको आर्थिक सहयोगमा गोरखाको अनुग्रह…
राजमार्गका अधिकाशं पक्की पुल जीर्ण बन्दै
नवलपरासी, २८ मङ्सिर । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीमा रहेका अधिकांश पक्की पुल जीर्ण बन्दै गएका छन् । पुल थोत्रो भएको तर समयमै मर्मत हुन नसक्दा थप जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न यात्रु…
विजुली थप भएकाले विद्युतभार कटौति कमगर्न सम्भव
काठमाडौँ, २८ मङ्सिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले विभिन्न २३ वटा परियोजनाबाट करिब ३०७ मेगावाट विजुली थप उत्पादन भएकाले हाल विद्युत्भार कटौति (लोडसेडिङ) कम गर्न सम्भव भएको जनाएको छ…
पोखरा, २६ मङ्सिर । विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत पोखरा उपत्यकाका नौ तालको व्यवस्थापन योजना तयार भएको छ । सिमसारको एकीकृत ताल बँेसी व्यवस्थापन योजना विषयको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा संरक्षण विकास…
काठमाडौँ, २५ मङ्सिर । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट (नाट्टा)को स्थापनाको पचास वर्ष पुगेको अवसरमा हिजो यहाँ पर्यटन प्रवर्द्धनका विभिन्न कार्यक्रम गरी स्वर्ण महोत्सव मनाइएको छ । नेपालको पर्यटनःराष्ट्रिय…
काठमाडौँ, २३ मङ्सिर । एसियाली विकास बैंकले २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि रु दुई अर्बभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपालको ऊर्जा आवश्यकता र मागलाई दृष्टिगत…
काठमाडौँ, २३ मङ्सिर । चालु आवको विकास खर्च ९० प्रतिशत पुरयाउन व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित खर्चलाई प्राथमिकता दिई उत्पादनशील एवम् पुँजीगत खर्च वृद्धि…
दुई जलविद्युत् आयोजनालाई अनुमति
काठमाडौँ, २३ मङ्सिर । ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको लगानी रहेको दुई मझौला जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार कुल ८० मेगावाट क्षमताका दुई आयोजनालाई…
ऊर्जाको प्रस्ताव अर्थमा रोकिँदा कार्यसम्पादनमा ढिलाइ
काठमाडौँ, २३ मङ्सिर । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका विभिन्न छवटा प्रस्ताव लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ । यसरी प्रस्ताव रोकिँदा ऊर्जाले आफ्नो कामलाई…
सुरुङ्गा (झापा), २३ मङ्सिर । जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि झापामा रु तीन करोड बजेट विनियोजन भएको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्षदेखि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको…
काठमाडौँ, २२ मङ्सिर । राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानद्वारा ‘नबिल विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कारहरु’ ४ जना वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताहरुलाई प्रदान गरियो । सो पुरस्कार सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा मिति २०७३/०८/२० मा…
माथिल्लो तामाकोसीको बयासी प्रतिशत काम सम्पन्न
काठमाडौँ, २१ मङ्सिर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको कार्य तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । आयोजनाका प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेका अनुसार स्थानीय काब्रे भिरको ३३७…
काठमाडौँ, १९ मङ्सिर । तपाई बैँकमा पैसा राखेर ढुक्क हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोस् तपाईको पैसा कुनैपनि बेला चोरी हुनसक्छ । पछिल्लो समय युरोपेली महादेशका विभिन्न मुलुकका व्यक्ति अत्याधुनिक उपकरण बोकेर…
काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने र जग्गाको अवैज्ञानिक वर्गीकरण खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका…
काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । भूकम्पबाट क्षति भएका घरमध्ये अनुदान रकम प्राप्त गरी १५ हजार ८६१ घर पुनःनिर्माण सुरु भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका…
छ गाविस जोड्ने गलेश्वर–राखु जिल्लाकै जीर्ण सडक !
म्याग्दी, १७ मङ्सिर । म्याग्दीको गलेश्वर–राखु सडकको ट्र्याक खोलेको झन्डै एक दशक बित्यो तर अझै पनि यस सडकखण्डमा सहजरुपमा यातायातका साधन गुड्न सक्दैनन् । मर्मतसम्भारको अभावमा यो सडक दिनप्रतिदिन जीर्ण…
काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई रु १३ अर्ब १६ करोड ५४ लाख सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकले…
नेपाल हाइड्रोको आइपिओ
काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडले रु १००।– अंकित दरका २ लाख ६० हजार कित्ता बराबर २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक शेयर निष्काशनको लागि बिक्री आह्वान…
मासिक रु चार करोड विप्रेषण एउटै वडामा
गुल्मी, १६ मङ्सिर । गुल्मीको वामी गाविस वैदेशिक रोजगारबाट जिल्लामा सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउने गाविस मध्येमा पर्दछ । गाविसको एउटै वडाका विभिन्न मुलुकको वैदेशिक रोजगारीका लागि चारसयजना भन्दा बढी युवा…
मिस्त्रीखोला आयोजना निर्माण सुरु
बाबियाचौर (म्याग्दी), १५ मङ्सिर । नारच्याङ गाविस– १ मा ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य सुरु भएको छ । रु पाँच अर्ब ६४ करोडको लागतमा रोवस्ट इनर्जी कम्पनीले…
खोटाङ, १५ मङ्सिर । एक मेगावाट क्षमताको मेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको परीक्षण प्रसारण सुरु गरिएको छ । दिक्तेल नगरपालिका– १० स्थित मेवाखोलाबाट समुदायको ३० प्रतिशत तथा सानिमा बैंकको ६० र बैंक…
काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा पानीको सतहले डुबाउने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले त्यसको विरोध गरेका छन्…
काठमाडौँ, १३ मङसिर । काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रथम चौमासिकमा लक्ष्यभन्दा करिब रु सात करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कामपाका राजस्व महाशाखा प्रमुख धु्रव काफ्लेका अनुसार चालु आवको प्रथम चौमासिकमा…
उत्थानशील सहरी समुदायका लागि राष्ट्रिय रणनीति मस्यौदा
काठमाडौँ, १३ मङ्सिर । बहुप्रकोप उच्च भएको सहरी क्षेत्रलाई विपद् जोखिम न्यून गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उत्थानशील सहरी समुदायका लागि राष्ट्रिय रणनीति मस्यौदा तय गरेको छ ।…
काठमाडौँ, १३ मङ्सिर । बहुप्रतिक्षित एवम् महत्वपूर्ण आयोजना मानिएको ढल्केबर सवस्टेसनको काम आगामी एक महिनाभित्र सम्पन्न हुने भएको छ । हिउँदमा बढदो विद्युत् माग पूरा गर्न सहज हुने सो सवस्टेसनको…
पाँचथर, १३ मङ्सिर । पाँचथरको भारपा र याङ्नाम गाविसको सिमानामा बग्ने हेवा खोलामा निर्माण गरिएको हेवाखोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण प्रसारणको चरण सुरु गरेको छ । आयोजनाको जिम्मा लिएको पाँचथर…
दोलखा, १२ मङ्सिर । जिरी नगरपालिकालाई इन्जिनियर पर्याप्त नहुँदा पुनःनिर्माणको काम प्रभावित बनेको छ । यसअघि नै पुनःनिर्माणका लागि गाउँ गाउँमा इन्जिनियरको टोली राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट खटिएको बताइए पनि नगरपालिकामा…
माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ आयोजना: ऋणको अवधि पाँच वर्ष थप्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह
काठमाडौँ, १० मङ्सिर । गोरखा भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य चाँडै सुरु हुने भएको छ । कुल ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना गत वर्ष…
काठमाडौँ, ९ मङ्सिर । सरकारले घोषणा गरेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई साकार पार्ने लक्ष्यका साथ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान)ले यही मङ्सिर ३० गतेदेखि ऊर्जा सम्मेलन…
क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया), ९ मङ्सिर । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र अस्ट्रेलियाली विदेशमन्त्री जुलिया बिसपबीच बिहीबार अस्ट्रेलियाली राजधानी क्यानबेरामा भेटवार्ता भएको छ । बुधबार अस्ट्रेलिया आइपुग्नुभएका मन्त्री डा महत र बिसपबीच…
ललितपुर, ९ मङ्सिर । सवारी चालक अनुमतिपत्रको फाराम भर्न नसकेर बुधबार फर्किनुभएका सिन्धुपाल्चोकका रमेश तामाङ बिहीबार पनि फर्कन बाध्य हुनुभयो । बुधबार बिहान ७ बजे नै एकान्तकुना पुग्नुभएका उहाँ भीड…
मालपोतद्वारा अठतीस करोड राजस्व सङ्कलन
पोखरा, ८ मङ्सिर । जिल्ला मालपोत कार्यालयले चालु आवको तीन महिनामा रु ३८ करोड ६५ लाख ५५ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले राजस्वतर्फत रु ३२ करोड ५७ लाख…
बक्राहा खोलामा तीन अर्ब पचास करोडको गुरूयोजना
विराटनगर, ७ मङ्सिर । मोरङको बक्राहा खोलामा तटबन्ध निर्माणका लागि रु तीन अर्ब ५० करोडको गुरूयोजना तयार गरिएको छ । नदीको दुवैतर्फ पुरानो तटबन्धको उचाइमा बढोत्तरी, स्पर निर्माणलगायतका कार्य सम्पन्न…
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर । दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियाका लघु जलविद्युत् व्यवसायीको संस्था ‘हाइड्रो इम्पावरमेन्ट नेटवर्क’को तेस्रो वार्षिक सम्मेलन तथा कार्यशाला गोष्ठी आजदेखि यहाँ सुरु भएको छ । नेपाल लघु…
विद्युत उत्पादन कम्पनी दर्ता
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर । नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा विद्युत उत्पादन कम्पनी दर्ता गरेको छ । बुढीगण्डकी, नलसिंगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे, सुनकोशी जस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना…
कम्पनी ऐन संशोधन विधेयक प्रस्तुत
काठमाडौँ, ३ मङ्सिर । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा कम्पनी ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७३ प्रस्तुत भएको छ । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्दै जनताले घरमै बसेर बिद्युतीय माध्यमबाट पनि…
भारु नोट सटही नहुँदा सास्ती
पाल्पा, ३ मङ्सिर । भारत सरकारले भारु एक हजार र पाँच सयको नोटको कारोबारमा रोक लगाएसँगै जिल्लाका सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको छ । भारतमा सेना, प्रहरी, तथा अन्य काम गर्ने…
बैंक नहुँदा राहदानी जारी हुन सकेन
बैतडी, ३ मङ्सिर । बैतडीको पुरचौँडी क्षेत्रका एक दर्जन गाविसका सर्वसाधारणलाई सेवा दिने उद्देश्यले असार पहिलो साता हाटमा स्थापना गरिएको इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी जारी हुन सकेको छैन । जिल्लाको…
जिविस भक्तपुरको स्तर खस्केकोमा चिन्ता
भक्तपुर, ३ मङ्सिर । जिल्ला विकास समिति भक्तपुरको स्तर खस्कँदै गएकामा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका गरेका छन् । जिविस हलमा आयोजना गरिएको सामाजिक संपरीक्षण कार्यक्रममा बिहिबार प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि…
दोलखा, ३ मङ्सिर । कालिन्चोकमा केबुलकार निर्माणमा संरक्षित वन अतिक्रमण भएको भन्दै जिल्ला वन कार्यालय, दोलखाले पत्र काटेको छ । दोलखाको प्रसिद्ध धार्मिक एवम् पर्यटकीयस्थल कालिन्चोकमा केबुलकार निर्माणको काम सुरु…
चितवन, २ मङ्सिर । चालु आवको पहिलो चौमासिकमा करिब आठ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय भरतपुरका अनुसार चालु आवको चार महिनामा पुँजीगततर्फ रु २८…
वीरगन्ज, २ मङ्सिर । जिल्लामा कर छल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । जिल्लाका ठूला करदाताले समयमा कर तिरे पनि साना करदाताले भने राजस्व छल्ने गरेका छन् । राजस्व छल्ने करदाताको…
काठमाडौँ, २ मङ्सिर । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थसमितिले नेपालीसँग रहेका ५०० र एक हजार दरका भारुको सटही प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको अर्थसमितिको बैठकले नेपाली जनतासँग…
हेटौँडा, २ मङ्सिर । मकवानपुरमा भूकम्पबाट भत्किएका खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम सुरु गरिएको छ । भूकम्पका कारण पूर्ण र आंशिक रुपमा क्षति पुगेका १४ जिल्लामा ८०० वटा खानेपानी योजना…
भक्तपुर, ३० कात्तिक । अनन्तलिङ्गेश्वर नगरपालिका– १५ का भूकम्पपीडितले आफ्नो् नाम लाभग्राहीको सूचीमा छुटेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । भूकम्पबाट घर भत्किए पनि अनुदान पाउनेको सूचीमा नाम समावेश नगरेको…
ललितपुर, ३० कात्तिक । बिरामी छोरीलाई जचाउन पाटन अस्पताल लैजान लाग्नुभएकी जडीबुटीकी सीता न्यौपाने झन्डै डेढ घन्टासम्म बालकुमारीमा ट्राफिक जाममा पर्नुभयो । कोटेश्वरस्थित कार्यालय जानका लागि दैनिक माइतीघर घुम्ने गरेको…
चितवन, २९ कात्तिक । गरिब बिरामीलाई उपचारमा सहुलियत दिन बजेट अभाव भएको जनाउँदै आएको यहाँको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा अनावश्यक खर्च प्रशस्त भएको पाइएको छ । अस्पतालमा दसैँ, तिहार…
गोरखा, २९ कात्तिक । पुरातत्व विभागले गोरखा सदरमुकामको तल्लो दरबार र माथिल्लो दरबार क्षेत्रमा लगाउँदै आएको बन्देज फुकुवा गरेको छ । दरबार क्षेत्रको २०० गज जग्गा क्षेत्र वरपर स्थानीयवासीलाई नक्सा…
महिलाको नाममा जग्गा जिष्ट्रेसन गर्ने क्रम बढ्दो
रसुवा, २९ कात्तिक । सरकारले राजस्वमा छुट दिने नीति लिएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गर्ने कार्य क्रमशः बढ्दै गएको छ । मालपोत अधिकृत फणीन्द्र दाहालका अनुसार गत…
बागलुङ, २९ कात्तिक । जिल्लामा मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्यक्रम सुरु भएको छ । ५९ गाविस र बागलुङ नगरपालिकाका ११ वडा गरी ७० वटा दर्ता केन्द्रबाट नामावली सङ्कलन गरिनेछ…
काठमाडौँ, २५ कात्तिक । उपत्यकामा विस्तार गरिएका सडक लामो समयमा पुरा नभएकाकारण ट्राफिक जाम, धुलोजस्ता समस्या बढेकाले छिटो काम सक्न निर्देशन दिइएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिको आजको बैठकमा सडक…
धनगढी, २५ कात्तिक । भारतले भारु ५०० र एक हजारका नोटको कारोबारमा रोक लगाएसँगै भारतसँग सीमा जोडिएका कैलालीका विभिन्न ठाउँका सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । आफ्नो साथमा रहेको भारु हजार…
काठमाडौँ, २५ कात्तिक । नेपाल पर्यटन बोर्डले घुमफिर वर्षलाई मध्यनजर गरी नयाँ पर्यटकीय प्याकेज तयार गरेको छ । निजी पर्यटन व्यवसायीको छाता सङ्गठनसँगको साझेदारीमा बोर्डले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यलाई…
काठमाडौँ, २५ कात्तिक । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नविकरण, सञ्चालन, अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ‘अनलाइन निर्देशिका’ ल्याएको पाँच महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । ऐन नआउनजेलसम्मका लागि अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई…
नेपालगन्ज, २५ कात्तिक । भारत सरकारले गत मङ्गलबार रातिदेखि चलन चल्तीमा रहेको भारु ५०० र एक हजारको नोटमा रोक लगाएपछि नेपालगन्जका व्यापारी र सर्वसाधारणपनि प्रभावित भएका छन् । विशेषतः भारतमा…
किसानलाई दश मेट्रिक टन बीउ
फलेवास (पर्वत), २५ कात्तिक । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले किसानलाई १० मेट्रिक टन आलुको बीउ वितरण गरेको छ । धान र कोदो थन्क्याइसकेपछि खेतबारीमा हिउँदे खेतीका रुपमा लगाउने आलुको बीउ…
पोखरा, २४ कात्तिक । पोखरा उपमहानगरपालिकाका २९ वटै वडालाई आजदेखि प्लास्टिकका झोला र गिलास निषेध क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पोखरा…
रत्ननगर (चितवन), २४ कात्तिक । पूर्वी चितवनको शक्तिखोरस्थित विकट गाउँ कोलारमा सञ्चालन गरिएको चुनाखानीबाट बस्ती नै जोखिममा परेको भन्दै विकल्पको माग गरेका छन् । जिल्ला विकास समिति चितवनले प्रशासन कार्यालय,…
खानेपानी योजनाका लागि रु २२ करोड
दाङ, २४ कात्तिक । जिल्लाको खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा आव ०७३/०७४ का लागि रु २२ करोड भन्द बढी विनियोजन भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै रु पाँच करोड बढी…
नवलपरासीको दोस्रो ठूलो सरकारी अस्पतालमा आजबाट सेवा सुचारु
नवलपरासी, २४ कात्तिक । नवलपरासीमा दोस्रो ठूलो सरकारी अस्पतालको रुपमा सरकारले स्थापना गरेको चिसापानी अस्पतालले आजबाट आफ्नो सेवा औपचारिक रुपमा सुचारु गरेको छ । पन्ध्र श्ययाको क्षमता रहेको सो अस्पतालले…
भूकम्पपीडितको प्रश्न, ‘५० हजारले कसरी घर बनाउने ?’
भक्तपुर, २४ कात्तिक । भूकम्पले घर भत्काएर घरबार बिहीन भएका पीडितले सरकारले दिने पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँले घरको जग हाल्न समेत नपुग्ने गुनासो गरेका छन् । नगरकोट नगरपालिकाको ताथलीमा…
काठमाडौँ, २३ कात्तिक । सरकारले विशिष्ट योगदान पुरयाएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उपचार सहयोग अब बढीमा रु १५ लाखसम्म मात्र उपलब्ध गराउने भएको छ । मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर,…
भद्रपुर, २३ कात्तिक । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरले चालु आवको तीन महिनामा कूल रु ३७ करोड ९२ लाख ८८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले रु ३३…
भक्तपुर, २३ कात्तिक । भूकम्पीय आवास पुनःनिर्माण परियोजना, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन समितिले गाउँ गाउँमा अनुदान पाउने लाभग्राहीको नाम टाँसेपछि लाभग्राहीमा आफ्नो नाम छुटेका भूकम्पपीडितले आज विरोध गरेका छन् । भूकम्पले…
मेलम्ची, २३ कात्तिक । विनाशकारी भूकम्प गएको १८ महिना बितिसक्दा पनि सबैभन्दा बढी मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको सिन्धुपाल्चोकमा अझै पनि पुनःनिर्माणले गति पाउन सकेको छैन । नेपाल सरकारले भूकम्पपीडितका…
काठमाडौँ, २२ कात्तिक । सरकारले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक)को नौवर्षे सञ्चालन योजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकार र उक्त बैंकले कार्य सञ्चालनलाई सरोकारवाला पक्षसम्म…
अरुण काबेलीमा ४१ गुणा बढी आवेदन
काठमाडौँ, १९ कात्तिक । अरुण काबेली लिमिटेडले प्रति कित्ता रु.१००/– अंकित दरका ३० लाख कित्ता बराबरको ३० करोड रुपैयाको साधारण शेयर माग गरेकोमा ४१ गुणा बढी अर्थात १२ अर्ब ५०…
काठमाडौँ, १८ कात्तिक । जलविद्युत् गृह निर्माणका लागि उपकरण आपूर्ति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार कम्पनी आन्द्रिज हाइड्रोले नेपालमा कार्यालय विस्तार गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक ग्राहक दिवस‘कस्टमर डे’ मनाएको छ । ‘हाइड्रोपावर…
काठमाडौँ, १८ कात्तिक । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालको माध्यमिक शिक्षामा पहुँच विस्तार तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न रु १२ अर्ब ऋण सहयोगको घोषणा गरेको छ । बैंकले उक्त ऋणमध्ये…
मुस्ताङ, १८ कात्तिक । लोमान्थाङमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नहुँदा इलाका प्रशासन कार्यालयले राहदानी जारी गर्न सकेको छैन । राहदानीका लागि आवश्यक पर्ने रकम जम्मा गर्ने बैंक नहुँदा उपल्लो मुस्ताङका…
काठमाडौँ, १२ कात्तिक । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिले समितिको कार्यविधि तथा संरचना तयार गरेर वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आज बसेको…
द्विपक्षीय परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति
काठमाडौँ, ११ कात्तिक । नेपाल र भारत द्विपक्षीय सहयोगमा आधारित परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् । भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको मन्त्रिस्तरीय चौथो बैठकले दुवै मुलुकबीच…
काठमाडौँ, ११ कात्तिक । नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय वाणिज्य सन्धि आजदेखि आगामी सात वर्षका लागि नवीकरण भएको छ । दुई मुलुकबीचको व्यापार प्रवद्र्धन, सहजीकरण र विविधीकरण गर्ने हेतुले विसं २०६६…
सानिमा माई हाइड्रोपावरले १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौँ, ११ कात्तिक । सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेडको हालै सम्पन्न पाँचौं वार्षिक साधारण सभाले १ कित्ता शेयर बराबर १ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।…
नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तार कार्य चार महिनामा चार प्रतिशत मात्रै काम
चितवन, ११ कात्तिक । विगत चार महिनामा नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सडक विस्तार कार्य चार प्रतिशत मात्रै भएको छ । अघिल्लो वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काम प्रभावित भएको सो सडकमा यस…
काठमाडौँ, १० कात्तिक । युरोपेली सङ्घमा आबद्ध २६ मुलुकमा प्रत्येक वर्ष करिब चार हजार नेपाली विद्यार्थी पुग्ने गरेको पाइएको छ । विभिन्न विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थी जाने…
उन्नाइस लाख राजस्व असुली
राजविराज, १० कात्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राजविराज वितरण केन्द्रले आव २०७३/७४ को तीन महिनामा रु १९ लाख राजस्व असुल गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले…
बारपाक (गोरखा), १० कात्तिक । भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखाको बारपाक गाउँको जति चर्चा चासो सुनिन्छ त्यति पुनःनिर्माणमा भने कुनै चासो र चिन्ता भएको पाइएकोे छैन । भूकम्प आएको १८ महिना हुँदा…
राजस्व सङ्कलनमा अठतीस प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौँ, ९ कात्तिक । आव २०७३/७४ असोज मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलनमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आव २०७३/७४ असोज महिनासम्मको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रु ४०…
‘एनसेल’ को लाभांश भुक्तानी सम्बन्धमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण
सिफारिस नगरिएको स्पष्ट
काठमाडौँ, ९ कात्तिक । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न सञ्चार माध्यममा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ‘एनसेल’ को लाभांश सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकृष्ट भएको जनाएको छ । प्राधिकरणले एनसेल प्रालिलाई…
काठमाडौँ, ८ कात्तिक । संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (डिएफआइडी)ले राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)लाई नेपालमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि १५ लाख पाउन्ड बराबरको अनुदान सहायता प्रदान गरेको छ ।…
काठमाडौँ, ८ कात्तिक । व्यवस्थापिका—संसद्अन्तर्गत विकास समितिले रातिमासमेत काम गर्ने व्यवस्था मिलाएर विसं २०७४ असोज मसान्तभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउन खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको…
चितवन, ८ कात्तिक । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा भित्रने पर्यटकको सङ्ख्या गत आर्थिक वर्षमा घटेसँगै राजस्वमा गिरावट आए पनि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा निकासा हुने बजेटमा भने अहिलेसम्मकै उच्च रकम निकासा हुने…
इलाम, ७ कात्तिक । कात्तिक महिना सुरु भएसँगै मौसम खुलेपछि जिल्लाका पर्यटकीयस्थल पर्यटकले भरिभराउ हुन थालेका छन् । मौसम खुलेसँगै जिल्लाका कन्याम, अन्तु, पशुपतिनगर, सन्दकपुर, माईपोखरी, पाभीभरा, गजुरमुखी लगायतका धार्मिक…
नवलपरासी, ६ कात्तिक । जिल्लामा कर कार्यालयको सेवा केन्द्र नहँुदा यहाँका व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । कर सम्बन्धी सेवा लिनका लागि यहाँका सेवाग्राहीलाई रुपन्देही र चितवनस्थित कर कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता…
बेनी (म्याग्दी), ६ कात्तिक । घरमा आर्कषक टिभी, गोठमा दुहुनो भैसी र बैंकमा पैसा । केही वर्ष अगाडिसम्म म्याग्दीको पुलाचौर पुरुन्नेका दलित समुदायलाई यो सपना जस्तै लाग्थ्यो । आर्थिक अवस्था…
भोजपुर, ५ कात्तिक । भोजपुर जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई हालसम्म रु छ करोडभन्दा बढी रकम वितरण गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी राजन पाण्डेका…
काठमाडौँ, ४ कात्तिक । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अध्यक्षको निर्वाचन नगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने सहितको विधान संशोधन गरेको छ । महासङ्घको आज आयोजित विशेष साधारणसभाले निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष…
एडिबीका परियोजनालाई गति दिन जोड
काठमाडौँ, ४ कात्तिक । एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले लगानी गरेका परियोजनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेकाले सुधारका लागि सबै पक्षले कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्न जोड दिइएको छ । एडिबीले…
‘सार्वजनिक निजी साझेदारी केन्द्र्र’ स्थापना गरिने
काठमाडौँ, ३ कात्तिक । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रको सहकार्य गर्दै पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी केन्द्र’ स्थापना गर्ने भएको छ । पूर्वाधार विकासमा…
काठमाडौँ, ३ कात्तिक । गत वर्ष भूकम्पमा परी क्षति भएका तथा जोखिम भएका घरलाई बीमाबापत अहिलेसम्म रू १२ अर्ब तीन करोड दुई लाख भुक्तानी गरिएको छ । बीमा समितिले अहिलेसम्म…
कञ्चनपुर, १ कात्तिक । कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाका केरा उत्पादक कृषकले गड्डा चौकी भन्सार कार्यालयको गेटमै केरा तेस्र्याएर आज विरोध जनाएका छन् । दुवै जिल्लाका केरा कृषकले प्रयोगशालामा परीक्षण नगरीकनै…
एकसातामै रित्तिए गाउँघर, ज्यामी पाउनै मुस्किल
सिन्धुली, १ कात्तिक । हिन्दू नेपालीहरुको महान् पर्व विजयादशमी सकिएसँगै सिन्धुलीका गाउँ अहिले सुनसान जस्तै भएका छन् । दसैँको फूलपातीको दिन गाउँ फर्किएका युवा–युवती धमाधम गाउँ छाड्दा सुनसान जस्तै भएको…
पाल्पा, १ कात्तिक । पाल्पा जिल्लामा १३७ ओटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि स्थानीयलाई आवतजावतमा सहज भएको छ । झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि स्थानीय बासिन्दालाई बाह्रै महिना आवतजावत गर्न सहज हुन…
काठमाडौँ, ३० असोज । सरकारले विद्युतीय कारोबारलाई मान्यता दिनेगरी कम्पनी ऐन, २०७३ लाई संशोधनका लागि संसद्मा पठाउने तयारी गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयले यहाँ आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री…
कञ्चनपुरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्दै
कञ्चनपुर, २६ असोज । कञ्चनपुरबाट पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा विदेसिने युवापुस्ताकोेको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा…
विपन्न कोषबाट २५२ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
रत्ननगर (चितवन), २६ असोज । पूर्वी चितवनको खैरहनीमा गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि स्थापित छात्रवृत्ति कोषमा रु ४२ लाख सङ्कलन भएको छ । एक व्यक्तिले सुरु गरेको उक्त अभियानमा यसरी…
बहत्तर लाखको लागतमा सडक मर्मत
बाबियाचौर (म्याग्दी), २६ असोज । म्याग्दीको पोखरेबगरदेखि चित्र जोड्ने सडक मर्मतका लागि रु ७२ लाख खर्च भएको छ । पर्यटकीय स्थल घोडेपानी जोड्ने उक्त सडक सुधारका लागि जिल्ला विकास समितिले…
आज तलेजु भवानी मन्दिरमा भीड
काठमाडौँ, २४ असोज । काठमाडौँको हनुमानढोकास्थित तलेजु भवानीको मन्दिर आज सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष दसैँको नवरथाको नवमीका दिन मात्र उक्त मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने हुँदा…
काठमाडौँ, २४ असोज । बडादसैँको नवमीका दिन आज काठमाडौँका मुख्य बजार र सडक प्राय ः सुनसान देखिएको छ । दसैँ मनाउन काठमाडौँबाट मानिस आआफ्ना घर गएको र यहाँका बजार, कार्यालय…
काठमाडौँ, २२ असोज । दसैँ मान्नका लागि राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाबाट आजसम्म २२ लाख यात्रु बाहिरिएका छन् । उपत्यकाका विभिन्न नाकाबाट देशका विभिन्न गन्तव्यमा २२ लाखभन्दा बढी यात्रु गएका नेपाल यातायात…
विराटनगर भन्सार दुई दिन मात्र बन्द
उर्लाबारी (मोरङ), २२ असोज । यस वर्षको दसैँमा विराटनगर भन्सार कार्यालय दुई दिन मात्र बन्द हुने भएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म एक हप्तासम्म बन्द हुने भन्सार कार्यालय यस वर्ष टीकाको…
काठमाडौँ, २२ असोज । प्रत्येक वर्ष दुर्गा पक्ष अन्तर्गत आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिनमा मनाइने फूलपाती पर्व आज घर घरमा शास्त्रीय विधि अनुसार शुभ साइतको प्रतीक फूलपाती भित्र्याई मनाइँदैछ । घटस्थापनाका…
फलेवास (पर्वत), २० असोज । करिब एक दशकदेखि अलपत्र बनेको उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी लोकमार्गको निर्माण तीव्ररुपमा अघि बढेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेको भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी…
जापानद्धारा एकसाठी करोड सहयोग
काठमाडाँै, १९ असोज । जापान सरकारले विभिन्न सातवटा परियोजना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारलाई रु ६१ करोड सहयोग गरेको छ । नेपालस्थित जापानी दूतावासका अनुसार जापानले हनुमानढोकास्थित पञ्चमुखी हनुमान मन्दिर र…
काठमाडौँ, १९ असोज । युरोपेली सङ्घ, युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंक, जर्मन सहयोग नियोगले संयुक्त रुपमा चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन निर्माणमा करिब रु सात अर्ब २८ करोड (६५ मिलियन युरो) सहयोग गर्ने भएका…
काठमाडौँ, १९ असोज । दसैँको मुख्य दिन नजिकिँदै जाँदा विभिन्न पेसा र व्यवसायमा संलग्न भई उपत्यकामा बसोबास गर्ने मानिस बाहिरिने क्रम बढेको छ । असोज १५ गते घटस्थापनापछि १० हजार…
पोखरा, १९ असोज । नेपालीको महान् चाड बडादसैँको आगमनले पोखरा र आसपासमा केही दिनयता चहलपहल बढ्दै छ । दसैँलाई लक्षित गरी आवतजावत गर्नेको चाप सहर क्षेत्रमा बढिरहेको छ भने दसैँका…
पाल्पा, १८ असोज । ‘पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालय’ को कार्यालय स्थापना भएपछि यहाँ पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । तानसेनस्थित बहुउद्देश्यीय दरबार सङ्ग्रहालय क्षेत्रको अवलोकन गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढेको…
काठमाडौँ, १७ असोज । अनुकुल वातावरणले यतिखेर नेपालमा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । पदयात्रा पर्यटनको महत्वपूर्ण पाटो भएकाले पनि यो समय विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटक पनि घुमफिरमा निक्लिएका छन् ।…
काठमाडौँ, १७ असोज । बाँकेको राराबासदेखि मुुगुको रारा तालसम्मको नयाँ पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम आज यहाँ सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड र सोसाइटी अफ ट्राभल एन्ड टुर अपरेटर्स नेपाल…
काठमाडौँ, १७ असोज । तपाईको घर तथा आसपासमा विद्युत्भार कटौतीको समय भन्दा बढी समय विद्युत् कटौती भएको छ, नो लाइट शाखामा फोन गर्दा फोन उठ्दैन वा उठाएर पनि कर्मचारीले काम…
फलेवास (पर्वत), १६ असोज । पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाको काम सुरु भएको छ । आयोजनाकोे…
काठमाडौं, १५ असोज । हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैं आज शनिबारदेखि शुरु हुँदैछ । बडा दशैंको पहिलो दिन घटस्थापना आज घरघरमा जमरा राखेर मनाइँदै छ । आज जमरा राख्ने व्यक्तिले…
काठमाडौँ, १४ असोज । साउदी अरबका कम्पनीमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण पछिल्लो समय त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदार समस्या पर्ने सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले आज यहाँ…
काठमाडौँ, १४ असोज । सवारी साधन प्रयोगकर्ता कतै तपाईंले सवारी नियम उल्लङ्घन त गरिरहनुभएको छैन ? होसियार अब ट्राफिक प्रहरीका सबारी साधनमा जडिएका ड्यास बोर्ड क्यामराले पनि तपाईका गतिविधि नियाल्ने…
आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौँ संशोधन) विधेयक २०७३ बहुमतले पारित
काठमाडौँ, १४ असोज । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले अर्थतन्त्रसम्बन्धी तीन विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको छ । ती विधेयकमा आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौँ संशोधन)…
काठमाडौँ, १४ असोज । व्यवस्थापिका – संसद्को बैठकमा “सहकारी विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । विसं २०४८ मा बनेको सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्न नयाँ…
अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा रेग्मी नियुक्त
काठमाडौं, १४ असोज । अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी नियुक्त हुनु भएको छ । मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रा.डा. रेग्मीलाई नियुक्त गरेको हो । उनी कृषि क्याम्पस, रामपुर, चितवनका…
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक आज संसद्मा पेस गरिने
काठमाडौँ, १३ असोज । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटसँग सम्बन्धित राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेटसँग आश्रित उक्त…
पोखरा, १३ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज फेवाताल सरसफाइ अभियानको शुभारम्भ गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले पोखरा उपमहानगरपालिकाद्वारा हल्लनचोकमा आयोजित कार्यक्रममा फेवातालबाट जलकुम्भी झार निकालेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।…
काँकडभिट्टा (झापा), ११ असोज । सैतीसौँ विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट आज नेपाल प्रवेश गर्ने नर्वेका दुई पर्यटकलाई स्वागतसहित सम्मान गरिएको छ । काँकडभिट्टा हुँदै नेपालका विभिन्न पर्यटकीयस्थलको…
काठमाडौँ, १० असोज । विश्व पर्यटन दिवस मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा प्रवद्र्धन गर्न यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, तर नेपालमा यो दिवसलाई केवल ‘कर्मकाण्डी’ का…
म्याग्दी, १० असोज । विश्वप्रसिद्ध राउन्ड अन्नपूर्ण पदमार्गले समेटिएको म्याग्दीको घोरेपानीको पुनहिल क्षेत्रमा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । हरियाली जङ्गलबीचको डाँडाबाट दृश्यावलोकनका लागि बनाइएको आकर्षक पुनहिल टावरबाट मनोरम हिमशृङ्खलाको दृष्यावलोकनका…
गोरखा, १० असोज । भूकम्पपछि अवरुद्ध गोरखाको मनास्लु पदमार्ग खुलाउन जिल्ला विकास समितिले प्राविधिकसहितको टोली खटाएको छ । थुमीको सोतीदेखि सिर्दिवास गाविससम्मको पदमार्ग दसैँअघि सुचारु गर्न जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका ओभरसियर…
काठमाडौँ, ९ असोज । निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न अनुदान पाउने सूचीमा रहेका घरधनीलाई रु एक लाख थप गर्ने र रु तीन लाख निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको…
काठमाडौंको ४ ठाउँमा आकाशे पुल बन्ने
काठमाडौं, ८ असोज । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं (कामनपा) को चार ठाउँमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने भएको छ । कामनपाको विशेष नगर परिषदले यो योजनाको लागि थप ४ करोड रुपैया स्वीकृत…
काठमाडौँ, ७ असोज । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को पहिलो दुई महिनामा विनियोजित बजेटको ५.५ प्रतिशत अर्थात् रु पाँच करोड ७६ लाख ६६ हजार ४३९ बजेट मात्र खर्च भएको छ…
भूकम्पीडितका लागि काटिएको काठ कुहिन थाल्यो
काठमाडौँ, ७ असोज । भूकम्पपीडित जनतालाई उपलब्ध गराउन काटिएको काठ स्पष्ट नीति कार्यक्रम नहुँदा कुहिन थालेको छ । वैशाख १२ को भूकम्पले क्षति पुरयाएको संरचना पुनःनिर्माणका लागि वन विभागले गतवर्ष…
काठमाडौँ, ७ असोज । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभागद्वारा बल्खुमा नागरिक सहायता कक्ष आजदेखि सञ्चालन गरिएको छ । दसैँमा घर जान चाहने यात्रु तथा त्यस क्षेत्रमा ट्राफिक सूचना लिन बटुवा वा…
लमजुङ (बेसीसहर), ७ असोज । भुलभुलेमा निर्माण गरिएको सुरुङ मार्गले पर्यटकलाई आकर्षण गर्न थालेको छ । उक्त सुरुङ मार्ग अधिकांश आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्य बनेको छ । सम्भवतः नेपालकै पहिलो सुरुङ…
गुलरिया (बर्दिया), ७ असोज । बर्दियामा यस महिनामा भन्सार कार्यालयद्वारा राजस्व सङ्कलनमा १०८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आव २०७३/७४ मा राजापुर भन्सार कार्यालयको राजस्व असुलीको वार्षिक लक्ष्य रु एक…
पूर्जाको अभावमा अनुदान सम्झौता हुन सकेन
फलाँटे (काभ्रेपलाञ्चोक), ५ असोज । दुई गाविसबीचको जग्गा विवादले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बन्न नसक्दा जिल्लाको उत्तरपूर्वी भेगका एक हजार घर परिवारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् ।…
रु अठचालीस करोड भत्ता वितरण
भद्रपुर, ५ असोज । जिल्ला विकास समितिले आव २०७२/७३ मा ५३ हजार ३६९ जनालाई रु ४८ करोड ५४ लाख ५१ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक…
झण्डै साढे चार लाख अनुदान सम्झौता
काठमाडौँ, ४ असोज । भूकम्पबाट अतिप्रभापति १२ जिल्लाका चार लाख ४७ हजार ३५९ घरधुरीसँग आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनःनिर्माणको क्रममा रहेका लाभग्राहीलाई…
क्यासिनो नेपालको समस्या समाधान गर्न निर्देशन
काठमाडौँ, ४ असोज । व्यवस्थापिका संसद्, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले क्यासिनो नेपाल/नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरका पूर्व कर्मचारीका उजुरीका विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, होटल सोल्टी, गृहमन्त्रालय र नेपाल…
रिडी हाइड्रोपावरले ६ प्रतिशत बोनश शेयर दिने
काठमाडौं, ४ असोज । रिडी हाइड्रोपावर डेभलेपमेन्ट कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई गत आ.व.को मुनाफा मध्येबाट ६ प्रतिशत बोनश शेयर दिने भएको छ । कम्पनीको १५ औं वार्षिक साधारण सभाले उक्त निर्णय…
पाँचथर, ३ असोज । काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीले पाएको छ । पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने कावेली नदीमा निर्माण गरिने ३७.६ मेगावाट क्षमताको सो…
काठमाडौँ, ३ असोज । नेपालको संविधान जारी भएको पहिलो वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ विशेष समारोह आयोजना गरिएको छ । संविधानसभामार्फत एकवर्ष अघि आजकै दिन संविधान जारी भएको थियो । संविधान दिवस…
काठमाडौँ, १ असोज । सरकारले ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी दुई वर्षभित्र एक हजार ४५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण,…
कोषले निवृत्तिभरण योजना सुरु गर्ने
पोखरा, ३१ भदौ । कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्तालाई निवृत्तिभरण योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । कोषको ५५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा कोषको शाखा कार्यालय पोखराद्वारा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा शाखा प्रमुख विष्णु…
काठमाडौँ, ३१ भदौ । सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नाराका साथ मुलुकभित्रकै वित्तीय स्रोत परिचालन गरेर विभिन्न जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने भएको छ । माथिल्लो अरुण, दूधकोसी, तमोर, सुनकोसी तेस्रो…
चन्द्रौटा (कपिलवस्तु), ३१ भदौ । साठी वर्षपछि सडक बन्न लगेपछि कपिलवस्तु क्षेत्र नं ५ का जनता खुसी भएका छन् । विसं २०१३ मा निर्माण सुरु गरेको आरटियोमा विवाद भएपछि निर्माण…
काठमाडौँ, ३० भदौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी इन्द्रजात्राका अवसरमा आज वसन्तपुर दरबार क्षेत्र सरिक भई ‘जीवित देवी’कुमारीको दर्शन गर्नुभएको छ । वसन्तपुरमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले कुमारीसँगै गणेश र भैरवको…
जलविद्युत् आयोजनाबाट पाँचथर सबल बन्दै
पाँचथर, ३० भदौ । जलविद्युत् आयोजनाबाट पाँचथर सबल बन्दै गएको छ । जिल्लामा अहिले एउटा आयोजना सञ्चालनमा, अर्को आयोजनाको परीक्षण उत्पादन तथा र तीनवटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । फिदिम–रानीटार…
काठमाडौँ, ३० भदौ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने कामदारसँग विभिन्न नाममा बढी रकम उठाउने कार्य भइरहेको भन्दै सो कार्य नरोकिएसम्म सो देशमा जाने कामदारको प्रवेशाज्ञाका…
सोलुखुम्बु, ३० भदौ । जिल्लाको खुम्बु क्षेत्र (नाम्चे र खुम्जुङ)मा स्टार होटलसरहको सुविधा र त्योभन्दा बढी महँगी छ, तर त्यहाँका अधिकांश होटल होमस्टेअन्तर्गत सञ्चालित छन् । यसको मुख्य कारण हो…
दाङ, ३० भदौ । जिल्लामा पशु बिमा गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । आव २०७२/७३ मा २४ हजार ४७० पशुको बिमा भएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका पशु विकास अधिकृत…
नेपाली पर्यटनले इन्डोनेशियाबाट सिक्नैपर्ने पाठ
जकार्ता (इन्डोनेशिया), ३० भदौ । सत्र हजार बढी सामुद्रीक टापुको देश इण्डोनेशिया विश्व पर्यटनको आकर्षक गन्तब्य मानिन्छ । प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण इण्डोनेशियाको अर्को बलियो पहिचान भनेको यहाँको…
त्रिशुली गल्छी जलविद्युतको हकप्रद शेयर आउने
काठमाडौं, ३० भदौ । अपि पावर कम्पनीले १ बराबर २ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट निष्काशन अनुमति प्राप्त हुनासाथ प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको…
काठमाडौँ, २९ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरण र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको सदुपयोगलगायतका विषयमा विगतमा दिएका निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आज पुनःनिर्देशन दिएको छ ।…
काठमाडौँ, २८ भदौ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने कामदारसँग विभिन्न नाममा बढी रकम उठाउने कार्य भइरहेको भन्दै सो कार्य रोक्न माग गरेको छ । सङ्घका…
प्रमको भारत भ्रमण: पञ्चेश्वर आयोजनाको कार्यान्वयन र थप विद्युत् आयात
काठमाडौँ, २८ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही भदौ ३० गतेदेखि गर्न लाग्नुभएको भारतको राजकीय भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ…
काठमाडौँ, २८ भदौ । मुस्लिम समुदायको दोस्रो ठूलो पर्व बकर इद मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज एकै ठाउँमा बसी नमाज पढेर चौपायालाई कुर्वानी अर्थात् बलि दिई मनाउँदैछन् । इब्राहिमले सपनामा आफ्नो छोरा…
काठमाडौं, २७ भदौ । राष्ट्रिय ध्वजा बाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुईथान वाइड बडी जहाज खरिद गर्न आवश्यक पर्ने २५ अर्ब रुपैयाका लागि अर्थ मन्त्रालय जमानी बस्न तयार भएको छ ।…
काठमाडौँ, २७ भदौ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको जिम्मा लिन साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ । सात प्रदेशमा ९० दिनसम्म पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि कार्यअगाडि बढाउने तयारी…
दशैँ र तिहार नजिकिँदै गर्दा प्रहरी प्रशासनको सजगता
काठमाडौं, २७ भदौ । नेपालीहरूको महान पर्व दशैँ र तिहार नजिकीन लाग्दा प्रहरीहरूले सजगता अपनाउन थालेको छ । आर्थिक क्रियाकलाप हुने मुख्य मुख्य ठाउँहरूमा प्रहरी निगरानी बढाइसकेको छ । बैंक…
मन्त्रीको निर्णयले भाषा विवाद अदालत पुग्यो
काठमाडौं, २७ भदौ । परम्परागत नेपाली वर्णविन्यासको अस्तित्व मेट्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय र सो अनुरुप तया भएका पाठ्यक्रम खारेज गर्न दुई पत्रकार स्वागत नेपाल टपेन्द्र कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट…
म्याग्दी, २७ भदौ । हिमाली क्षेत्रमा पर्यटक भित्र्याउनका लागि म्याग्दी हुँदै रुकुम र डोल्पा जोड्ने नयाँ पदमार्गको पहिचान गरिएको छ । रुकुमका युवा पर्वतारोही मनबहादुर खत्रीको प्रयासमा हिमाली क्षेत्रलाई समेटेर विभिन्न…
त्रिशूली (नुवाकोट), २४ भदौ । सरकारले घर बनाउने अनुदान रकम देला र घर बनाउने सुरसार गरौँला भनेर बसेका घ्याङ्फेदी गाविसका भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता हुन नसक्दा हजारौँ भूकम्पपीडित अनुदान पाउनबाट वञ्चित…
महोत्सवमा एक करोड रुपैयाँ सङ्कलन
मुस्ताङ, २४ भदौ । जनहित बहुमुखी क्याम्पस जोमसोममा प्राविधिक शिक्षा पठनपाठन गराउने उद्देश्यले आयोजित धार्मिक तथा शैक्षिक महोत्सवमा एक करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यही भदौ ९ देखि १६…
खोटाङ, २४ भदौ । कर्मचारीको मिलोमतोमा जिल्ला अस्पताल खोटाङमा रहेको करोडौँका उपकरण कवाडीको भाउमा लिलाम बिक्री गरेको पाइएको छ । अस्पतालका भण्डारण शाखा प्रमुख नायब सुब्बा मणिराम ढकाललगायत केही कर्मचारीको…
उर्लाबारी (मोरङ), २४ भदौ । मोरङको मधुमल्लास्थित मिक्लुङ सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको पोखरीलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले पोखरी स्तरोन्नतिका लागि स्थानीय उपभोक्ता सक्रिय भएका छन् । मधुमल्ला–५ मा रहेको कत्ले…
रत्ननगर (चितवन), २३ भदौ । शिक्षाको ज्योति छर्न स्थापना भएको पुस्तकालय हार्डवेयर गोदाममा परिणत भयोभन्दा अचम्म मान्नुहोला तर पूर्ण साक्षर घोषणा भएको चितवनमा यस्तै भएको छ । चितवनको शिक्षित समाज…
बेसीशहर, २२ भदौ । पूर्वी लमजुङको दोर्दीखोलामा निर्माणाधिन नौथर–सेरा जोड्ने पुल ठेकेदारको लापरबाहीका कारण विगत– ५ वर्षदेखि अलपत्र छ । दोर्दी करिडोरका एक दर्जन गाविस जोड्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको…
रागिनासकोट, (लमजुङ) २२ भदौ । एतिहासिक एवम् पर्यटकीय गाउँका रुपमा चिनिएका पूर्वी लमजुङका रागिनासकोटमा अहिले स्थानीयले पुनःनिर्माण र होम स्टे सञ्चालनको तयारीमा जुटेको छ । भूकम्प गएको झन्डै १६ महिना…
गुलरिया (बर्दिया), २१ भदौ । नेपालीभुमि बर्दियाबाट वर्षायाममा हरेक वर्ष कानुनी अड्चनले गर्दा कर्णाली र बबई नदीबाट भारततर्फ बगेका करोडौँको रुपैयाँ मुल्यका काठ रोक्न सकिएको छैन । बर्सेनि काठलगायत अन्य…
रौतहट, २० भदौ । जिल्ला करदाता सेवा कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा रु १३ करोड भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आव ७२/७३ मा आयकर तर्फ रु ६ करोड २३…
पोखरा, १९ भदौ । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा अवस्थित नेपाल र चीनबीचको कोरला नाका सञ्चालनमा ल्याउने चर्चा चलेको धेरै समय बिते पनि यसका लागि काम भने मन्द गतिमा मात्रै अघि बढेको…
अपी पावरले १२३ मेगावाटको तीन जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने
काठमाडौं, १९ भदौ । अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले ७५ मेगावाटको त्रिशुली गल्छी, ४० मेगावाटको अपर चमेलिया र ८ मेगावाटको अपर नौगडगाढ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । अपी पावर…
पर्वतबासीका लागि युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको शेयर निष्काशन हुने
काठमाडौं, १९ भदौ । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्र पर्वत जिल्लाका बासिन्दाका लागि एकसय अंकित दरका ११ लाख ५० हजार कित्ता शेयर आउँदो भाद्र २६ गतेदेखि निष्काशन गर्न…
अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले १० प्रतिशत बोनस शेयर दिने
काठमाडौं, १९ भदौ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको १९ औं साधारण सभाले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत बोनस शेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । विद्युत विकास विभागबाट ९.९५ मेगावाटको…
काठमाडौँ, १८ भदौ । आवास निर्माणका लागि घरबाट नक्सापास गर्न दर्ता गरिए पनि महानगरको कार्यालय वा वडा कार्यालयमा पनि जानुपर्ने भएकाले अनलाइनबाट नक्सापासको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–१४…
हेटौँडा– काठमाडौँ छोटो दूरीको सडक बिस्तारमा तीव्रता
हेटौँंडा, १७ भदौ । हेटौँडा– काठमाडौँ जोड्ने छोटो दूरीको वैकल्पिक मार्ग बिस्तार कार्यले फेरी तीव्रता पाएको छ । नाकाबन्दीपछि सुस्त बनेको ९० किलोमिटर लामो सडकचौँडा बढाउने कार्यलाई कान्तिलोकपथ सडक आयोजनाले फेरी…
गोरखा, १७ भदौ । भूकम्प गएको १६ महिना भइसक्दा पनि गोरखाका अधिकांश स्वास्थ्य संस्था भवन पुनःनिर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । भूकम्पले भत्काएको ५४ वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवनमध्ये अहिलेसम्म…
काठमाडौँ, १७ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद् उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले आद्योगिकीकरणबाट नै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिनेमा जोड दिनुभएको छ । उद्योग मन्त्रालयको कामकारबाहीका सम्बन्धमा…
काठमाडौँ, १६ भदौ । सरकारले मलेसिया तथा मध्यपूर्व एसियाका कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमान, लेवनान, इराक, इरान, कुवेत, इजरायल, सिरिया, जोर्डन र यमनमा रहेका नेपालीलाई राहदानी शुल्क…
काठमाडौँ, १६ भदौ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि नेपाललाई बेलायत सरकारले रु १० अर्ब १० करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएकोे छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता…
काठमाडौँ, १६ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्ले कर्मचारी सञ्चय कोष (नवौँ संशोधन) विधेयक, २०७३ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त विधेयक परित गरियोस् भनी प्रस्ताव…
काठमाडौँ, १५ भदौ । जापान सरकारले नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६०औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर दुई भिन्न परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई रु एक अर्ब ८३ करोड २० लाख अनुदान…
एक्काइस जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता खारेज
काठमाडौँ, १४ भदौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण सुरु र सर्त पालना नगरेको भन्दै विभिन्न २१ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खारेज गरेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता गरेपछि…
काठमाडौँ, १४ भदौ । प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रपत्रिका वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन गर्ने भएको छ । वर्गीकरणलाई अझ व्यावहारिक, वस्तुनिष्ट, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन काउन्सिलअन्तर्गतको ‘वितरण सम्परीक्षण समिति’ ले सो मापदण्डको…
चौतारा, १४ भदौ । भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी जलविद्युत् केन्द्रबाट थप विद्युत् उत्पादन भएको छ । बाढीले पुरिएको क्षतिग्रस्त २ नम्बर ढोकालाई सफा गरी पूरै बन्द हुने…
मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले शेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौं, १३ भदौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई आयोजना प्रभावित पर्वतवासीलाई ११ लाख ५० हजार कित्ता शेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएको छ । कम्पनीले भदौ महिनाभित्र शेयर…
उपभोग्य वस्तु सहज बनाउनुपर्नेमा जोड
काठमाडौँ, १२ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले दसैँ, तिहार, छठ लगायत चाडमा दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेको…
बागलुङ, ११ भदौ । जिल्लामा सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट बिमितले उपचार लिन सुरु गरेका छन् । बागलुङमा उपचार सेवा लिने पहिलो बिमित सदस्यमा भिमकुमारी पाध्य हुनुहुन्छ । गत असार मसान्तभित्र…
भद्रपुर, ११ भदौ । झापा जिल्लामा आव २०७२/७३ मा १३ निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलमध्ये आठ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । आठ झोलुङ्गे पुलमा रु एक करोड चार लाख ९५ हजार…
जलविद्युतका लागि एक खर्ब सम्म स्वदेशबाटै लगानी जुट्ने
काठमाडौँ, १० भदौ । सरकारले प्रस्ट योजना ल्याउने हो भने जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि मुलुकभित्रै तत्काल रु एक खर्ब लगानी जुट्न सक्ने देखिएको छ । मुलुकका सरकारी सङ्घ संस्था तथा…
काठमाडौँ, ९ भदौ । सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ कम्पनी चाइना मेसिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (सिएमइसी)ले नेपालको दुई महत्वपूर्ण आयोजनामा लगानी गर्न चासो देखाएको छ । सो कम्पनीले तामाकोसी तेस्रो र तमोर जलविद्युत्…
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सुरु
पोखरा, ९ भदौ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माण कार्य सुरु गर्न थालेको छ । गत वैशाख १ गते पूर्व प्रधानमन्त्री केपी…
ललितपुर, ९ भदौ । जग्गाको स्वरुपमा ठूलो परिवर्तन भएका जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ५० वर्षपछि पुनः नापी सुरु भएको छ । विसं २०२१ मा नापी भएपछि ललितपुर जिल्लाका कुनै पनि स्थानमा…
कोषले तीन अर्ब बयासी करोड लगानी गर्ने
काठमाडौँ, ८ भदौ । गरिवी निवारण कोषले चालु आवमा विभिन्न जिल्लामा रु तीन अर्ब ८२ करोड २८ लाख ६६ हजार लगानी गर्ने भएको छ । सो बजेटअन्तर्गत दुई हजार ५६२…
कालिकोटको तिला नदिमा जलविद्युत परियोजना निर्माण हुने
काठमाडौं, ८ भदौ । कालिकोटमा रहेको तिला नदिमा ४२० मेगावाट क्षमताको तिला दोश्रो जलविद्युत परियोजना निर्माण हुने भएको छ । कम्पनीले आयोजनामा ४२ अर्ब १० करोड ६६ लाख रुपैया लगानी…
अनलाइनमार्फत राहदानी लिने बढे
काठमाडौँ, ६ भदौ । राहदानी विभागले प्रि–इन्रोलमेन्ट (अनलाइनमार्फत राहदानी आवेदन) सेवा सुरु गरेसँगै दैनिक एक हजारदेखि एक हजार ५०० मानिसले अनलाइनमार्फत फाराम भर्ने गरेका छन् । राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर…
सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्द्धनमा व्यवसायी जुट्दै
काठमाडौँ, ५ भदौ । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भए पनि भौगोलिक कठिनाइ तथा पूर्वाधार अभावले ओझेलमा परेको सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न व्यवसायी जुटेका छन् । पृथ्वीको स्वर्ग मानिने रारा, प्राकृतिक सुन्दरता तथा…
गोरखा, ३ भदौ । तिब्बतसँग जोडिएको उत्तरी गोरखाको सामागाउँ गाविसको सीमा क्षेत्रसम्म चिनियाँ गाडी चल्न सुरु गरेको छ । चीन सरकारले सामागाउँ गाविसको सिमानामा रहेको तिब्बतको रुई गाउँसम्म कच्ची सडक…
सैनिक कल्याण कोषमा नगद मौज्दात ३३ अर्ब रुपैयाभन्दा बढी
काठमाडौं, ३ भदौ । नेपाली सेना, सैनिक कल्याण कोषको नगद मौज्दात ३३ अर्ब ६ करोड १० लाख ३६ हजार रुपैया पुगेको छ । २०३२ सालमा कोष स्थापना हुँदा १ करोड…
नागरिकताभन्दा राहदानी लिने बढी
बागलुङ, २ भदौ । वैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षणले जिल्लामा राहदानी लिनेको सङ्ख्या बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका अनुसार नागरिकताभन्दा राहदानी बनाउने बढी छन् । गत आवमा नागरिकताको तुलनामा राहदानी…
ललितपुर, ३२ साउन । गत वर्षको विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीका कारणले पाटन सङ्ग्रहालयमा आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । आव २०७२/७३ मा अघिल्लो आवमा गत आवभन्दा २६ हजार ८७…
पर्यटकबाट रु पैँतीस करोड राजस्व उठ्यो
काठमाडौँ, ३० साउन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गत आवमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकबाट रु ३५ करोड ११ लाख ४७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले दुई…
राहदानीबाट रु तीन करोड राजस्व
बागलुङ, ३० साउन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत आवमा साधारण सेवातर्फ दर्ता भएका ६ हजार ७७४ राहदानीबाट रु दुई करोड ९८ लाख ३२ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । दू्रत…
भीमदत्तनगर, २७ साउन । कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीले गत आवमा रु २२ करोड ८६ लाख ४८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत आवमा कार्यालयले वार्षिक रु १४ करोड ७८…
सिन्धुली, २५ साउन । छ महिना अघिसम्म पोखरी– ३ लुम्तीकी ३५ वर्षीया खिनाकुमारी पहाडी जाँतो पिस्ने गर्नुहुन्थ्यो । उज्यालो हुँदा एक डालो चामल परम्परागत ढुङ्गाको जाँतोबाटै पिस्नु पर्दा उहाँको हात,…
काठमाडौँ, २५ साउन । पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, सक्षम र मर्यादित बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकारको योग्यता परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । पत्रकारिता व्यवसाय नै नगर्नेहरुले पनि प्रेस अनुमतिपत्र लिई…
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा खतिवडाद्वारा राजीनामा
काठमाडौँ, २४ साउन । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाले आजदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पत्र पठाएर राजीनामा दिइएको उपाध्यक्ष…
आर्थिक क्षेत्र विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस
काठमाडौँ, २४ साउन । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७३’ पेस गरेको छ । समितिका सदस्य नारायणबहादुर कार्कीले प्रतिवेदन…
बागलुङ, २४ साउन । जिल्लाको पश्चिम भेगका १० वटा टेलिकमका ‘बिटिएस टावर’ विद्युत् अभावमा बन्द हुँदा दर्जन बढी गाविसमा सञ्चार बिच्छेद भएको छ । टावर बन्द भएपछि नेपाल टेलिकमबाट प्रवाह…
विद्युत प्राधिकरणले लाप्छेखोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता गरेको छ
काठमाडौं, २४ साउन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अपर लाप्छेखोला जलविद्युत आयोजनाबीच विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले र अपर लाप्छेखोला जलविद्युत…
नेपाल टेलिकमको रिचार्जमा आएको समस्या समाधान
काठमाडौं, २३ साउन । नेपाल टेलिकमको NT Recharge System Upgrade गर्ने क्रममा NT Recharge Card मार्फत हुने रिचार्ज (*412*Pin Code# / 1412 IVR) मा २०७३ साउन २२ गतेदेखि विशेष प्राविधिक…
नेपाल वायुसेवा निगमले भाद्र २ बाट दुबईमा सिधा उडान गर्ने
काठमाडौं, २३ साउन । नेपाल वायुसेवा निगमले २०७३ भाद्र २ गतेबाट संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सिधा उडान गर्ने तयारी पूरा गेको छ । निगमले दुबईमा साताको तीन दिन आइतबार, मंगलबार…
बुढीगण्डकी जलविद्युतका लागि करबाट डेढ महिनामै एक अर्ब रुपैया जम्मा
काठमाडौं, २२ साउन । नेपाल र नेपालीको गौरवको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार निर्माण करबाट डेढ महिनामै एक अर्ब रुपैया जम्मा भएको छ । नेपाल आयल…
आयात निर्यातका लागि विशाखापटनम बन्दरगाह सहज हुने
काठमाडौँ, २१ साउन । नेपालले तेस्रो मुलुकसँग आयात निर्यात गर्न विशाखापटनम बन्दरगाह सहज हुने भएकाले यसमा आइपरेका समस्या समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको…
काठमाडाँै, २१ साउन । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नियमावली ल्याउन व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ । हाल सो नियमावली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विचाराधीन छ ।…
काठमाडौँ, २१ साउन । चालु आवमा धानको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा करिब सात लाख ५० हजार मेट्रिक टनले वृद्धि हुने भएको छ । गत वर्ष २०७२/७३ मा ४२ लाख ५०…
काठमाडौँ, १८ साउन । आव २०७२/७३ मा राहदानीबाट रु ६ अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । राहदानी विभागबाट रु दुई अर्ब ६९ करोड ९४ लाख ४० हजार र कूटनीतिक…
रु छयानब्बे करोड राजस्व सङ्कलन
तुलसीपुर (दाङ), १८ साउन । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गत आवमा रु ९६ करोड चार लाख ४० हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । करअधिकृत थमलाल भट्टराईका अनुसार गत आवमा कार्यालयले रु…
भक्तपुर, १८ साउन । भक्तपुर नगरपालिकाले जिल्लाका सम्पदास्थलको अवलोकन गर्न आउने पर्यटकबाट पर्यटन शुल्कबापत गत आवमा रु १० करोड ९२ लाख ७५ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भूकम्पका कारण…
काठमाडौँ, १६ साउन । जैविक फोहरको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गर्न लागेको बायोग्यास उत्पादनको तायारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भारतबाट ल्याउन लागिएको बायोग्यास उत्पादन गर्ने प्रविधि नेपाल…
एक सय तीन मेगावाट विद्युत् प्रणाली बाहिर
काठमाडौँ, १५ साउन । महत्वपूर्ण तीन जलविद्युत् आयोजना बन्द हुँदा मुलुकभर विद्युत्भार कटौतीको समय घट्न सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल दैनिक सात घन्टा विद्युत्भार कटौती गर्दै आएको छ…
उनन्साठी करोड भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन
पोखरा, १५ साउन । यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीले आव २०७२/७३ को अन्त्यसम्ममा रु ५९ करोड १७ लाख १० हजार १०८ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो कार्यालयले अघिल्लो वर्ष रु…
काठमाडौ १४ साउन । हिमालय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर्वत खुर्कोट बगँैचा कक्षा– ९ मा अध्ययरत अमन पौडेलले विज्ञान विषयमा पढेको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेर विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण बनाएका छन् । अमनले…
काठमाडौँ, १४ साउन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस वर्ष विज्ञापन करमा लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको छ । गत आवमा विज्ञापन करमा लक्ष्यभन्दा ४१३ प्रतिशतले प्रगति गरेको महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख…
पोखरा, १४ साउन । मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) द्वारा वैदेशिक रोजगारपीडितका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्न पोखरामा स्थापित शाखा कार्यालयमा दुई महिनामा ठगीका २७ वटा उजुरी दर्ता…
काठमाडौँ, १३ साउन । आगामी वर्ष कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ३४ प्रतिशत रहेको छ ।…
मोबाइलमा मौसमजन्य विपद् सम्बन्धी पूर्वसूचना नेपाल टेलिकमले निःशुल्क उपलब्ध गराउने
काठमाडौं, १३ साउन । नेपाल टेलिकम र जल तथा मौसम बिज्ञान विभाग बीच जल तथा मौसमजन्य विपद् सम्बन्धी पूर्वसूचना मोबाइल मार्फत SMS प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।…
काठमाडौं, १३ साउन । नेपाल सरकारले लगानी बोर्डमा रिक्त रहेको सदस्य पदमा हालै बसेको लगानी बोर्डको २४ औं बैठकले नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र पर्यटन व्यवसायी बालकृष्ण शिवाकोटीलाई…
पर्यटन प्रवर्द्धनार्थ हङ्कङमा पैदलयात्रा
काठमाडौँ, १० साउन । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नेे उद्देश्यका साथ हङकङमा आइतबार हाइकिङ (लामो दूरीको पैदलयात्रा) आयोजना गरिएको छ । ‘हाइक फर नेपाल’ शीर्षकमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा ‘एसियाको विश्व परिचित…
दक्षिण कोरियाबाट रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा अवैध बाटोबाट भित्रिँदै
काठमाडौं, १० साउन । विदेश गएका नेपालीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैया बराबर रेमिट्यान्स पठाएका छन् । गत आ.व. २०७१/७२ को जेठ मसान्तसम्ममा ५ खर्ब…
नागरिक लगानी कोषले व्यावसायिक भवन बनाउने
काठमाडौं, १० साउन । नागरिक लगानी कोषले वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (हाल संसद भवन) को पूर्वपट्टि रहेको ६ रोपनी जमीनमा व्यावसायिक भवन बनाउने भएको छ । त्यस स्थानमा केही वर्षअघिदेखि…
काठमाडौँ, ९ साउन । विश्वमा धार्मिक पर्यटनको महत्वपूर्ण गन्तव्यका रुपमा रहेको नेपालमा पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकमध्ये धेरैको रोजाइँ पवित्र धार्मिक क्षेत्रको भ्रमण हुने गरेको…
गत आवमा बिदेसिने ९४ हजार १७४ घटे
काठमाडौँ, ८ साउन । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या उल्लेख्यरुपमा घटेको छ । यो वर्ष अघिल्लो आवभन्दा ९४ हजार १७४ कम नेपाली बिदेसिए । वैदेशिक…
काठमाडौँ, ८ साउन । सन् २०३०(विसं २०८७तिर) सम्म मुलुकको कुल ऊर्जाको माग दश हजार मेगावाट हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले प्रतिवर्ष कुल २० प्रतिशतको दरले ऊर्जाकोे…
काठमाडौँ, ८ साउन । विश्वका ७३ मुलुकका नागरिकले नेपालको हिमालको आरोहण गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपालसहितका आरोहीले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यको रसपान गरेको मात्रै नभई…
काठमाडौँ, ७ साउन । सराकोर भएका निकायको कडा निर्देशन तथा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको कडा प्रावधानका कारण पछिल्लो दिनमा जलविद्युत् आयोजनामा निवेदन दिनेको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ ।…
रु बाह्र अर्ब राजस्व सङ्कलन
चितवन, ७ साउन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गत आव २०७२/७३ मा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले रु ११ अर्ब ९२ करोड ५७ लाख २९ हजार लक्ष्य…
काठमाडौँ, ७ साउन । नयाँ घर निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकामा हरेक दिन दैनिक १० देखि १५ वटासम्म नक्सा दर्ता हुने गरेकामा केही दिनदेखि अनलाइनबाटनै नक्सा पासको प्रक्रिया सुरु गरेपछि कमी…
रु साढे पाँच अर्ब राजस्व सङ्कलन
पोखरा, ६ साउन । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आव २०७२/७३ मा रु पाँच अर्ब ४३ करोड १० लाख ८७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले सो अवधिमा रु पाँच अर्ब…
भद्रपुर, ६ साउन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल रु एक अर्व ४२ करोड ३० लाख २२ हजार राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ । सो…
सत्र अर्ब राजस्व सङ्कलन
पर्सा, ५ साउन । वीरगन्जको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले आव २०७३/७४ मा लक्ष्य भन्दा रु ११ करोड ५४ लाख ४० हजार बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत आवका…
काठमाडौँ, ५ साउन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)द्वारा नेपालमा सञ्चालित सामुयल शून्य भोकमरी समुदाय परियोजनाका लागि कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान…
दैलेख, ५ साउन । दैलेखको द्वारीमा निर्माण सम्पन्न हुने तयारीमा रहेको ३.७५ मेगावाटको द्वारीखोला हाइड्रोपावरले बाढी र पहिरो आउँदा ठूलो क्षति बेहोरेको छ । पाइपलाइन र मुहान साइटमा पहिरो र…
काठमाडौँ, ४ साउन । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को तुलनामा आव २०७२/७३ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु ३२ करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । अघिल्लो आवमा रु एक अर्ब ४६ करोड…
चितवन, ४ साउन । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण पहाड र तराई प्रभावित भएपछि सर्वसाधारणले बासस्थानको रोजाइँको रुपमा चितवनलाई लिएपछि यहाँको जग्गाको कारोबार बढेको छ । भूकम्पबाट जिल्ला न्यून मात्र प्रभावित…
रु अठ्ठाइस करोड राजस्व सङ्कलन
विराटनगर, ४ साउन । गत आवमा जिल्लाका पाँच कार्यालयबाट रु २७ अर्ब ८७ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयले रु १६…
छिटै फोरजी सेवा सञ्चालन हुने
काठमाडौँ, ३ साउन । सरकारले मोबाइल प्रयोगकर्ताको सुविधाका लागि आगामी असोज(अक्टोबर) महिनापछि नेपालका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा ‘फोरजी’ सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार…
‘वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम आप्रवास’ प्रतिवेदन सार्वजनिक
काठमाडौँ, २ साउन । ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम आप्रवास’मा नेपालको स्थिति २०७१/७२ विषयक प्रतिवेदन आज सार्वजनिक भएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विसं २०६५/६६ देखि २०७१/७२ सम्म सात वर्षको…
काठमाडौँ, १ साउन । मुलुकले लामो भारतको अघोषित नाकाबन्दी एवम् भूकम्पका कारण समस्या खेप्नु परे पनि तोकिएको लक्ष्यभन्दा करिब रु छ अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ ।…
तीन सय प्रतिशत घरजग्गा कर वृद्धिको विरोधमा धर्ना
काठमाडौँ, २९ असार । सङ्घीय गठबन्धन आन्दोलन, नेवाः ऐक्यबद्धता समूहले काठमाडौँ महानगरपालिकाले ३०० प्रतिशतभन्दा बढी घरजग्गा कर वृद्धि गरेको विरोधमा आज महानगरपालिकाको कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दियो । धर्नामा महानगरपालिकाका…
मागअनुसार ‘स्मार्ट कार्ड’ दिन विभाग असमर्थ
काठमाडौँ, २९ असार । यातायात व्यवस्था विभागले सेवाग्राहीको मागअनुसार ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण गर्न सकेको छैन । चालक अनुमतिपत्रलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ मा परिवर्तनका लागि ६२ हजारले राजस्व तिरेको सवारी चालक अनुमतिपत्र बागमती…
धरहरा पुनःनिर्माण कोषमा रु एक करोड हस्तान्तरण
काठमाडौँ, २८ असार । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडले ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कोषमा आज रु एक करोड हस्तान्तरण गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिमिटेडका अध्यक्ष महेशकुमार गुरागाईंले प्रधानमन्त्री…
काठमाडौँ, २७ असार । बुटवल पावर कम्पनीले पुँजी वृद्धि गरी रु दुई अर्ब १० करोड २२ लाख पाँच हजार ७०० पुरयाउने भएको छ । कम्पनीको आज सम्पन्न विशेष साधारणसभाले जारी…
वित्तीय चुनौती सम्बोधन गर्न साझा प्रयास
काठमाडौँ, २७ असार । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को दोहोरो कर मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौतासम्बन्धी तीनदिने गोष्ठी आजदेखि यहाँ सुरु भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका…
फलेवास (पर्वत), २७ असार । यस जिल्लाका करिब २३ हजार युवायुवती वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा रहेका छन् । भारतबाहेक नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त राष्ट्रमा जाने युवायुवतीको सङ्ख्या २२ हजार…
काठमाडौँ, २७ असार । इतिहास रच्दै सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आजबाट औपचारिकरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी प्रारम्भ गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीशका रुपमा उहाँले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण…
काबेली पावर लिमिटेडले स्थानीयलाई शेयर बाँडफाँड गरे
काठमाडौं, २७ असार । स्थानीय प्रभावितलाई अरुण काबेली पावर लिमिटेडको शेयर बाँडफाँड गरेको छ । सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले असार ३ गतेदेखि १७ गतेसम्म स्थानीय प्रभावितलाई शेयर बिक्री खुल्ला गरेको थियो…
सेन्ट डेनिस, फ्रान्स, २७ असार । आयोजक राष्ट्र फ्रान्स र पोर्चुगलबीच भएको युरो २०१६ को फाइनल खेलमा पोर्चुगलले फ्रान्सलाई १–० लाई हराउँदै युरो २०१६ को च्याम्पियन बन्यो । पहिलो हाफको…
काठमाडौँ, २६ असार । व्यवस्थापिका–संसद्, संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सर्वसम्मत रुपमा प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको छ । सुनुवाइपछि निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन…
सञ्चार मन्त्री राईद्वारा सिक्का सार्वजनिक
काठमाडौँ, २६ असार । नेपाल फिलाटेलिक सोसाइटीको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले आज रु एक हजार र रु एक सयको स्मारिका सिक्का सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।…
काठमाडौँ, २६ असार । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिले पुनर्निर्माण कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७३ जारी गरेको छ । गत वर्ष वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो र…
काठमाडौँ, २६ असार । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै बदलिँदो अवस्थामा उत्पादन, वितरण तथा प्रसारणको कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने भन्दै विभिन्न तीन फरक कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ…
विराटनगर, २६ असार । युवालाई पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्न जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले किसानलाई रु ४७ लाख अनुदान रकम वितरण गरेको छ । चालु आवमा कार्यालयले युवा लक्षित व्यावसायिक गाईभैँसी प्रवर्द्धन,…
भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउने तालिम
भक्तपुर, २६ असार । अब बन्ने घरलाई भूकम्पीय जोखिमबाट बचाउन गाउँ गाउँमा भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणसम्बन्धी निःशुल्क तालिम सञ्चालन गरिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुरले जिल्लाका नगरकोट, चाँगुनारायण र…
काठमाडौँ, २५ असार । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७३ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । उक्त प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सदनसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो । त्यसअघि…
जुम्ला, २५ असार । चालु आव २०७२/०७३ मा हिमाली जिल्ला जुम्लाबाट विदेशिने युवाको सङ्ख्या एक हजार ३८ पुगेको छ । रोजगारीका लागि युवा विदेशिने क्रम तीव्र रुपमा बढिरहेको छ ।…
चौतारा, २४ असार । भोटेकोसी नदीमा मङ्गलबार राति आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी गाविसमा हालसम्म ६० घर बगाएको छ । बाढीबाट विस्थापन भई कोदारीको चौकीडाँडामा आश्रय लिएर बसिरहेका करिब १०० मध्ये…
मार्सेले, फ्रान्स, २४ असार । युरो २०१६ अन्तर्गत आयोजक राष्ट्र फ्रान्स र जर्मनीबीच भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा फ्रान्स २–० ले जर्मनीलाई हराउँदै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । पहिलो हाफको ७औं…
काठमाडौँ, २३ असार । आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीले आठ लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा साधारण सेयर जारी गर्नका लागि आवेदनसमेत दिइसकेको छ । आयोजनाका…
काठमाडौँ, २३ असार । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले बुधबारसम्म दुई लाख २३ हजार ८३० घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरेको छ । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये २४ हजार ४२८ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको…
विराटनगर, २३ असार । मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज इद–उलफितर पर्व उत्साहका साथ मनाइरहेका छन् । रमजानको एक महिनाको अवधि पूरा भएको रात्रिमा चन्द्रमाको अवलोकन गरेको भोलिपल्ट यो पर्व मनाउने गरिन्छ ।…
वेल्सलाई २–० ले हराउँदै पोर्चुगल युरो २०१६ को फाइनलमा प्रवेश
लियोन, फ्रान्स, २३ असार । युरो २०१६ अन्तर्गत आज पोर्चुगल र वेल्स बीच भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा पोर्चुगलले २–० ले जित हासिल गरी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । पहिलो हाफको…
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खाना पकाउने ग्यास सिलिण्डर प्रयोगमा ल्याउने गृहकार्य
काठमाडौं, २२ असार । नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खाना पकाउने ग्यास सिलिण्डर प्रयोगमा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । हाल नेपालमा चलनचल्ती रहेका सिलिण्डर निकै पुराना र जोखिम पनि…
काठमाडौँ, २१ असार । व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले कम्तीमा तीन महिनाका लागि पुग्ने गरी एलपी ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।…
काठमाडौँ, २१ असार । व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको छ…
काठमाडौँ, २१ असार । व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । सो विधेयकमा…
अनुदान सम्झौता गर्न गाउँ पस्दै भूकम्पपीडित
मेलम्ची, २१ असार । भूकम्पपछि बासस्थान गुमाएर राजधानी काठमाडौँ र जिल्ला बाहिर बस्दै आएका भूकम्पपीडित आवास पुनःनिर्माणको लागि अनुदान सम्झौता गर्न यतिबेला आफ्नो गाउँ धाउँदै छन् । भूकम्पपछि थातथलो मेटिएपछि…
दुर्गम बस्तीका ५७ परिवारलाई सोलार
उर्लाबारी (मोरङ), २१ असार । सुगम जिल्लाको दुर्गम गाउँ भनेर चिनिने मोरङको रमितेखोलाका ५७ घरपरिवारलाई सोमबार सोलार बत्ती वितरण गरिएको छ । नेकपा (एमाले) की सांसद राज्यलक्ष्मी गोल्छाको सांसद विकास…
कृषि व्यवसाय नै राष्ट्र निर्माणको आधार हो उपराष्ट्रपति
काठमाडौं, २० असार । उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले नेपालको मुहार परिवर्तन गर्नका लागि युवाको कृषिमा सहभागिता अनिवार्य रहेको बताउनु भएको छ । फोर एच नेपालद्वारा आयोजना गरिएको प्रथम युवा कृषि…
काठमाडौँ, २० असार । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको अर्थसमितिको आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७१ माथि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ । समितिको आजको बैठकमा सो…
वीरगन्ज, २० असार । वीरगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा लामो समयदेखि विद्युत् चोरी, अनियमितता एवम् महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई कारबाही गरी रु तीन करोड ३० लाख विद्युत् महसुल सङ्कलन गरिएको छ । नेपाल…
सेन्ट डेनिस, फ्रान्स, २० असार । युरो २०१६ आयोजक राष्ट्र फ्रान्स र आइसल्याण्डबीच भएको चौथो क्वाटरफाइनल खेलमा फ्रान्सले २ का विरुद्ध ५ गोल गरी सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । सेमिफाइनल…
काठमाडौँ, १९ असार । निर्यात प्रवर्द्धनको माध्यमबाट मुलुकमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) तत्काल सञ्चालन गर्न सांसदले आग्रह गर्नुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित…
इटालीलाई ६–५ ले हराउँदै जर्मनी युरो २०१६ को सेमिफाइनलमा प्रवेश
फ्रान्स, १९ असार । युरो २०१६ अन्तर्गत जर्मनी र इटीलीबीच भएको तेस्रो क्वाटरफाइनलमा निर्धारित समय र थप गरिएको समयमा १–१ गोलको बरबरी भई खेल पेनाल्टी सुटआउटमा परिणत भएको थियो ।…
वेल्स ३–१ को अन्तरले बेल्जियमलाई हराउँदै युरो २०१६ को सेमिफाइनलमा प्रवेश
फ्रान्स, १८ असार । युरो २०१६ अन्तर्गत बेल्जियम र वेल्सबीच भएको दोस्रो क्वाटरफाइनल खेल वेल्सले १ का विरुद्ध ३ गोल गरी सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । वेल्सले सेमीफाइनल पोर्चुगलसँग खेल्नेछ…
विश्वसनीयता र आर्थिक सुदृढीकरण गर्दै निगम
काठमाडौँ, १७ असार । मुलुकको प्रतिष्ठाका रुपमा रहेको ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले पछिल्लो समय आफ्नो विश्वसनीयता र आर्थिक अवस्थालाई सुदृढीकरण गर्दै लगेको छ । नियमित उडानको सुनिश्चितता नहुने, समयमा उडान…
गुलरिया (बर्दिया), १७ असार । नेपाल एक भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो जहाँ उच्च हिमशृङ्खला, खोँच एवम् गल्छी तथा तराईका समथर फाँट यहाँका भौगोलिक विविधताका उदाहरण हुन् । उत्तरीभागका हिमताल यहाँका…
विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनाउने तयारी
काठमाडौं, १७ असार । नेपाल सरकारले विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनाउने तयारी गरेको छ । यो ऐनले लगानीकर्ताहरूलाई सुविधा, सहुलियत र सुरक्षाका लागि प्राथमिकता दिनेछ । यसले विदेशी…
काठमाडौं, १७ असार । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले साउन १ गतेदेखि औसतमा करिब १९ प्रतिशत ले विद्युत महसुल बढाउने निर्णय गरेको छ । साना ग्राहकले मासिक न्यूनतम ८० रुपैया महसुल…
पोर्चुगल टाइब्रेकरमा पोल्याण्डलाई हराउँदै सेमिफाइनलमा प्रवेश
फ्रान्स, १७ असार । युरो २०१६ अन्तर्गत पोर्चुगल र पोल्याण्ड बीच भएको पहिलो क्वाटरफाइनलमा १–१ गोलको बराबरी भई टाइब्रेकर (पेनाल्टी सुटआउट) मा गएको थियो । पेनाल्टी सुटआउटमा पोर्चुगलले ५–३ ले…
काठमाडौँ, १६ असार । काठमाडौँ उपत्यकाको दिगो यातायात व्यवस्थापनका लागि मोनो र मेट्रो रेलको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन १७ गते उपत्यकामा मोनो(एक लेन)…
जुम्ला, १६ असार । मुलुकका सातवटा जिल्लासँगै प्रदेश नं ६ अन्तर्गत जुम्ला ‘सुपर कृषि जोन’मा छनोट भएको छ । ११औँ राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा सो कुरा बताइएको हो । मुलुक…
मुस्ताङ, १६ असार । युरेनियम अन्वेषण, पेट्रोलियम पदार्थ र नुनको खानी अध्ययन गर्न यहाँ आएको सरकारी टोलीले आफ्नो अध्ययन पूरा गरेको छ । उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा वि.सं २०७०/७१ सालमा…
काठमाडौँ, १५ असार । काठमाडाँै उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा रोपाइँ गरी आज १३औँ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ । ‘व्यावसायिक धानखेतीको आधार, सामुदायिक नर्सरीको विस्तार’ नाराका साथ खाद्य सङ्कट उत्पन्न…
इलाम, १५ असार । जिल्लामा आजदेखि सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम (स्वास्थ्य बिमा) आजदेखि सुरू भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य सुरक्षा संयोजन समितिका अनुसार असारमा स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकले भदौबाट…
गरिबी घटे पनि जोखिम कायम छ: विश्व बैंक
काठमाडाँै, १५ असार । बितेका दुई दशकमा गरिबी घटाउन नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरे पनि गरिबीबाट माथि उठेको जनसङ्ख्या पुनः गरिब हुने जोखिम यथावत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व…
काठमाडौँ, १४ असार । नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीच द्विपक्षीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहकार्यको प्रतिबद्धतासहित १६ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल–तिब्बत संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिको आज यहाँ सम्पन्न…
स्पेनलाई हराउँदै इटाली युरो २०१६ को क्वाटरफाइनलमा प्रवेश
फ्रान्स, १३ असार । युरो २०१६ प्रिक्वाटरफाइनल अन्तर्गत भएको इटाली र स्पेनको खेलमा इटालीले २–० जित हात पार्दै क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । खेलको १०औं मिनेटमा इटालीका पेलेले हानेको बल…
गौतम बुद्ध विमानस्थलको लक्ष्य: दैनिक साठी अन्तर्राष्ट्रिय उडान
भैरहवा, १३ असार । सन् २०३३ सम्ममा दैनिक ६० अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने लक्ष्यका साथ गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भएको, कुनै पनि…
काठमाडौँ, १३ असार । खानी तथा भूगर्भ विभागले इमाडोलमा रहेको मिथेन ग्यासलाई भण्डारण गर्ने तयारी गरेको छ । विभागका प्राकृतिक ग्यास तथा कोइला शाखा प्रमुख पृथ्वीलाल श्रेष्ठका अनुसार ग्यास भण्डारण…
बनेपा, १३ असार । काभ्रेपलाञ्चोकमा उत्पादन हुँदै आएको करोडौँ मूल्यको बोधिचित्त मालाबाट न्यून राजस्व उठ्ने गरेको छ । बोधिचित्तलाई वनस्पती विभागले बयर प्रजातिको रुपमा राखेपछि मालाको राजस्व प्रतिकिलो एक रुपैयाँ…
चिलीले जित्यो कोपा अमेरिका २०१६
अमेरिका, १३ असार । न्यूजर्सीको इष्ट रुथरफोर्डको मेटलाइफ स्टेडियममा सम्पन्न कोपा अमेरिका २०१६ को फाइनल खेल अर्जेन्टिना विरुद्ध चिली निर्धारित समय र थप गरिएको ३० मिनेटको समय दुवैमा कुनै पनि…
हंगेरीविरुद्ध ४–० को सहज जित निकाल्दै बेल्जियम युरो २०१६ को क्वाटरफाइनलमा
फ्रान्स, १३ असार । युरो २०१६ को प्रिक्वाटर फाइनल (राउण्ड अफ १६) मा हंगेरीलाई ४–० ले हराउँदै बेल्जियम क्वाटर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । खेल सुरु भएको १०औं मिनेटमा बेल्जियमका…
जर्मनी ३–० को जित हासिल गर्दै युरो २०१६ को क्वाटरफाइनलमा प्रवेश
फ्रान्स, १२ असार । युरोकप २०१६ को प्रिक्वाटर फाइनल अन्तर्गत जर्मनी विरुद्ध स्लोभाकियाको खेलमा खेलभरि नै जर्मनी पूरै हाभी भएको थियो । जर्मनीले स्लोभाकिया विरुद्ध सजिलै ३–० को जित हासिल…
लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुखद्वारा पदबहाली
काठमाडौँ, १२ असार । लगानी बोर्डका नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुख महाप्रसाद अधिकारीले आजबाट आफ्नो पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । सरकारले केही दिन पहिलेमात्रै अधिकारीलाई चार वर्षका लागि बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त…
काठमाडौँ, १२ असार । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले ‘स्याटेलाइट सिटी’ निर्माणका लागि तयारी सुरु गरेको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा उपत्यकामा तीनवटा स्याटेलाइट सिटी निर्माण गरिने कार्यक्रम ल्याएको थियो…
काठमाडौँ, १२ असार । खानी तथा भूगर्भ विभागले थप १५ ठाउँमा तीन खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लगाएको छ । विभागका उपसचिव जयराज घिमिरेले सल्यान, तनहुँ, उदयपुर, धादिङ जिल्लाका १५ ठाउँमा…
अायोजक फ्रान्स युरोकप २०१६ को क्वाटरफाइनफमा प्रवेश
फ्रान्स, १२ असार । आयोजक फ्रान्स युरोकप २०१६ को क्वाटर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । फ्रान्सले रिपब्लिक अफ आयरल्याण्डलाई एकका विरुद्ध दुई गोल गर्दै क्वाटर फाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न…
भैरहवा, १२ असार । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा अगाडि बढिरहेको भए पनि निर्माण सामग्रीको अभावले केही समस्या थपेको छ । आयोजनाका लागि अत्यावश्यकपर्ने गिटी…
काठमाडौँ, १२ असार । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडित भएबापत राहत र सहयोग पाउन सक्ने परिवारको पुनःसर्भेक्षण गराउने जनाएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत…
पोर्चुगल युरो २०१६ को क्वाटरफाइनलमा
फ्रान्स, १२ असार । युरो कप २०१६ अन्तर्गत प्रिक्वाटरफाइनलको तेस्रो खेलमा पोर्चुगल अतिरिक्त समयमा एक गोल गर्दै क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । पोर्चुगल र क्रोएसियाबीच भएको खेल निर्धारित ९० मिनेटको…
वेल्स पनि क्वाटरफाइनलमा प्रवेश
पेरिस, ११ असार । युरो कप २०१६ अन्तर्गत प्रिक्वाटरफाइनलको दोस्रो खेल वेल्स र उत्तरी आयरल्याण्डबीच भएको खेलको नवौं मिनेटमा उत्तरी आयरल्याण्डका खेलाडीले हानेको निकै राम्रो बललाई वेल्सका गोलकीपरले बचाएको थियो…
स्वीट्जरल्याण्डलाई हराउँदै पोल्याण्ड युरो कप २०१६ को क्वाटरफाइनलमा प्रवेश
फ्रान्स, ११ असार । युरो कप २०१६ अन्तर्गत आज सुरु भएको प्रिक्वाटरफाइनलको पहिलो खेल स्वीट्जरल्याण्ड र पोल्याण्डबीचको खेलमा ३९औं मिनेटमा पोल्याण्डका ग्रोसिकीले दिएको पासको सदुपयोग गर्दै ब्लास्जकोस्कीले गोलमा परिणत गरे…
भूकम्पबाट क्षति भएका घर मर्मतसम्भारका लागि पचास हजार
काठमाडौँ, १० असार । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट आंशिक क्षति भएका घर मर्मतसम्भार एवम् प्रवलीकरण गर्नका लागि रु ५० हजार उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको…
सुन प्रतितोला रु तीन हजारले वृद्धि
काठमाडौं, १० असार । नेपाली बजारमा शुक्रवार सुनको मूल्य तोलामा ३ हजार रुपैयाँ बढेर अहिले मूल्य वृद्धिमा अहिले सम्मकै नयाँ रेकर्ड बनेको छ । सुनको मूल्य बिहीबार ५६ हजार रुपैयाँ…
‘नेपाल– बैँकक फेस्टिवल’ काठमाडौँमा हुने
काठमाडौँ, १० असार । नेपाल तथा थाइलैन्डको राजधानी बैँककको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले आगामी असोज १४ देखि १८ गतेसम्म ‘नेपाल बैँकक फेस्टिवल’ काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिने भएको छ ।…
ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डले आठ अर्ब लगानी गर्ने
काठमाडौँ, १० असार । ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डका १४ उद्योगले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा रु सात अर्ब ९६ करोड ७० लाख लगानी गर्ने भएका छन् । आइल्यान्डका उद्योगले सबैभन्दा बढी लगानी रु…
लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त
काठमाडौं, ९ असार । नेपाल सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले…
एल.पी. ग्यासको सुरक्षा मापदण्डका लागि समिति गठन
काठमाडौं, ९ असार । आपूर्ति मन्त्रालयले एल.पी. ग्यास उद्योगहरुले पूरा गर्नुपर्ने सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन एवं छानविन गरी सुधारका उपायहरु सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पाँच सदस्यीय…
खोटाङ, ९ असार । जिल्लामा सञ्चालन गर्न लागिएको मेवाखोला हाइड्रोपावर असार अन्तिमदेखि सञ्चालन हुने भएको छ । खोटाङ जिल्लालाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त बनाउने अभियानका साथ उत्पादनको काम थालिएको एक मेगावाट क्षमताको…
काठमाडौँ, ७ असार । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले अनलाइन सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७३ संशोधनका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष र…
दैलेख, ६ असार । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भए दैलेख, अछाम र सुर्खेतको आर्थिक जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आउनेमा स्थानीयवासी आशावादी देखिएका छन् । स्थानीयवासीको जीवनमा आयोजनाले पार्ने सकारात्मक…
काठमाडौँ, ५ जेठ । पेसागत महासङ्घ नेपालको छैटौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा विश्वनाथ प्याकुरेल विजयी हुनुभएको छ । प्याकुरेलले अर्का अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी बाबुराम थापालेभन्दा ११४ मत बढी प्राप्त गरी अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको…
मुस्ताङ, ४ असार । जिल्ला सदरमुकाम जोमसोममा हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्रयास सफल भएको छ । बुद्ध पावर प्रालि पोखराको प्रयासमा साढे एक किलोवाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन भएको हो ।…
काठमाडौँ, १ असार । पेसागत महासङ्घ नेपालको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यही असार ३ देखि ५ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ । महासङ्घले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रत्येक चार…
धुन्चे (रसुवा), १ असार । सुक्खा बन्दरदगाह बनाउन पहिलो चरणको गृहकार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । सहायक प्रजिअ दीपक केसीका अनुसार सुख्खा बन्दरगाह बनाउन टिमुरे गाविस इलाकाको जग्गा अधिकरण…
राहदानी वितरणबाट साढे तीन करोड राजस्व
इलाम, १ असार । राहदानी वितरणबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रु तीन करोड ७१ लाख ७५ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आवमा सात हजार १४६ जनालाई राहदानी वितरण गरिएको…
काठमाडौँ, १ असार । भूकम्पबाट क्षति भएका घर पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले एक लाख २७२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरेको छ । भूकम्प अति प्रभावित उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा सम्बन्धित…
लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ३ जनाको नाम सिफारिस
काठमाडौं, ३२ जेठ । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ३ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा तथा पूर्व…
पाँचथर, ३२ जेठ । यहाँका सात गाविसमा व्यावसायिक रुपमा अलैँची र अदुवाको खेती विकास एवम् विस्तार गर्न कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरिएको छ । अलैँची तथा अदुवाको प्रशस्त उत्पादन हुने ती…
काठमाडौँ, ३२ जेठ । व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिले कर्मचारी सञ्चय कोष नवौँ सशोधन विधेयक, २०७१ लाई आज पारित गरेको छ । उक्त विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित उपसमितिको…
२०७३/७४ को बजेट कार्ययोजना मस्यौदा तयार गर्न सबै मन्त्रालयलाई आग्रह
काठमाडाैं, ३१ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेर पठाउन अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार…
दमक, ३१ जेठ । चिनियाँ उद्योगी, व्यवसायीको एक टोलीले दमकमा बनिने दुईवटा योजनाको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । आज साँझ चिनियाँ ग्लोबल एनजीओ युनियनका उपाध्यक्ष चउ हुई जोनको नेतृत्वमा दमक…
बजेटमा आर्थिक क्षेत्रलाई समेट्न आग्रह
काठमाडौँ, ३१ जेठ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, अमेरिकाले नेपालको दिगो विकास र आर्थिक स्वावलम्बनका लागि आव २०७३/७४ मा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रलाई समेट्न आग्रह गरेको छ । सङ्घले आज यहाँ पत्रकार…
दोलखा, ३१ जेठ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा लिइएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको ७९ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । विसं २०७३ सालमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको तामाकोसी आयोजना भूकम्प…
जाजरकोट, ३१ जेठ । जाजरकोटमा १३ हजार घरपरिवार गरिब रहेको पाइएको छ । जिल्लाका २७ हजार ४०७ घरपरिवारसँग लिइएको लगतअनुसार १३ हजार ९९५ घरपरिवार गैरगरिब रहेको तथ्याङ्कले जनाएको छ ।…
गाईघाट (उदयपुर), ३० जेठ । उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं ९ देउरी बजार र वडा नं १० को जलजले बजारलाई लक्षित गरेर रु पाँच करोडको लागतमा खानेपानी योजना सम्पन्न…
पढ्नका लागि बालश्रमिक ! काठमाडौँ, ३० जेठ । राजधानीमा गरिएको एक अध्ययनले ६४ प्रतिशत घरेलु बालश्रमिकले राम्रो शिक्षाका लागि आफू बालश्रमिक बनेर साहुको घरमा काम गरिरहेको बताएका छन् । कुल…
काठमाडौँ, २९ जेठ । ज्येष्ठ नागरिकका मागका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्न ज्येष्ठ नागरिकले ‘मेची–महाकाली’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । करिब एक महिना १५ दिनसम्म हुने अभियान आइतबार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट…
काठमाडौँ, २९ जेठ । डेनमार्क र नर्वेले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमलाई रु ७० करोड अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । जनउत्तरदायी संयन्त्रबाट पारदर्शीता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरी…
काठमाडौँ, २९ जेठ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये पाँच जिल्ला नुवाकोट, रसुवा, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली र रामेछापमा छ हजार घर निर्माण कार्यमा आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग गर्ने…
तीव्ररुपमा सामूहिक आवास निर्माण हुँदै
धुन्चे (रसुवा), २९ जेठ । भूकम्पपीडितका लागि नेपाली सेनाले निर्माण गर्न लागेको सामूहिक आवासको निर्माण कार्य तीव्ररुपमा अगाडि बढेको छ । हाकु गाविसबाट विस्थापित भई धुन्चे सदरमुकामको इमरुङ क्षेत्र त्रिशूली…
काठमाडौँ, २८ जेठ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले नगर विकास योजनाभित्र पर्ने सहरी क्षेत्रमा हुने क्रियाकलाप सम्बन्धी निर्देशिका (मापदण्ड) २०३३ अनुसार १४ सडक केन्द्रदेखि दायाँबायाँ ११ मिटर छोड्न अनुरोध गरेको…
किसानलाई त्रिपन्न लाख अनुदान
रामपुर (पाल्पा), २८ जेठ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले किसानलाई फार्म सुदृढिकरण कार्यक्रमअन्तर्गत रु ५३ लाख ३० हजार बराबरको अनुदान रकम वितरण गरेको छ । युवालक्षित विशेष गरी पशु उत्पादन र…
भक्तपुर, २८ जेठ । भक्तपुरको पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटको शान्तिडाँडामा बुद्धको विशाल मूर्ति स्थापना गरिएकोे छ । यहाँको ८० रोपनी क्षेत्रफलमा स्थानीय बासिन्दाको पहलमा २०७० सालबाट सुरु भएको बुद्ध मूर्ति स्थापनालगायतका…
वीरगन्ज, २८ जेठ । सरकारले सहकारी खेती तथा साना सिँचाइका लागि चालु आवमा जिल्लाका कृषकलाई अनुदान दिन रु ७६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा गरिबी…
काठमाडौँ, २८ जेठ । युवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरुलाई उद्यमशील बनाउन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले युवा सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद् र गैरआवासीय नेपाली सङ्घद्वारा संयुक्त रुपमा…
टोकियो, २८ जेठ । गत अप्रिल १६ मा गएको ७.३ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र जापानको कुमामोतोमा पीडितलाई सहायता गर्न भनेर गत साता टोकियोबाट गएको नेपाली समुदायको एक टोलीले धनी…
धरहरा बनाउन पच्चीस लाख सहयोग
काठमाडौँ, २७ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सैनिक श्रीमती सङ्घले धरहराको नवनिर्माण गर्न सहयोगस्वरुप रु २५ लाख हस्तान्तरण गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सङ्घकी अध्यक्ष श्रीमती रीता क्षत्रीले आज…
तिलतालीको बाढी: करोडौँको क्षति, धेरैको उठिबास
डोटी, २७ जेठ । बुधबार राति आएको बाढीले डोटीमा करोडौँको क्षति भएको छ । डोटीको लाटामाण्डौ गाविसको तिलतालीमा गएराति वर्षासँगै आएको बाढीले ठूलो क्षति गरेको हो । स्थानीय जिजौडाखोला, किनमणेखोला,…
काठमाडौँ, २७ जेठ । भारतीय लगानीकर्ताले अगाडि बढाएका दुई महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको अनुमति नपाउँदा अगाडि बढ्न सकेको छैन । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको लगानीकर्ता ग्रान्धी…
काठमाडौँ, २६ जेठ । मुलुकमा ऊर्जाको चरम सङ्कट बढेका बेला छिमेकी भारतका १९ उद्योगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र रु ४५ अर्ब ८० करोड ३० लाखभन्दा बढी लगानी गर्ने भएका छन्…
काठमाडौँ, २६ जेठ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था गरे पनि म्यानपावरले रु १० हजार लिएको कागजमा कामदारलाई सहिछाप गराउँदै भारी मात्रामा रकम असुल्दै आएको खुलेको छ…
बनेपा, २६ जेठ । एक साताअघि बनेपामा परेको वर्षाका कारण विभिन्न बालीमा रु दुई करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ । कृषि सेवा केन्द्र बनेपाका अनुसार धान, मकै, तरकारी बालीमा ठूलो…
काठमाडौँ, २५ जेठ । फोहोरबाट बायोग्यास निकाल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ । कामपाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङका अनुसार बायोग्यास निकाल्नका लागि अहिले मेसिन ल्याउने तयारी भएको…
Kathmandu, June 7: A number of mountaineers who set world records while scaling the Mount Everest, the world's highest peak, were honoured amidstaprogramme here Tuesday. Temba Tsheri Sherpa…
काठमाडौँ, २५ जेठ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफूले मानवीय सेवाका क्षेत्रमा गरेका कामका बारेमा आफूलाई आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग गरिरहेका दातालाई जानकारी दिएको छ । आजदेखि यहाँ सुरु भएको साझेदारी…
काठमाडौँ, २४ जेठ । सार्वजनिक संस्था कर्मचारी सङ्गठन नेपालकोे नवौँ महाधिवेशनले सार्वजनिक संस्थालाई व्यावसायिक र सेवामूलक कार्यका आधारमा वर्गीकरण गरी पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्ने लगायत १९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ…
काठमाडौँ, २४ जेठ । भूकम्पपीडितका लागि विभिन्न सङ्घसंस्थाले आठ हजार १०० निजी घर निर्माण गरिदिने सम्झौता भएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले यहाँ आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी,…
धनगढी, २४ जेठ । नेपालमा कृषि यान्त्रीकरण दर ४० प्रतिशत पुगेको एक तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । कृषि मन्त्रालयको पहलमा कृषि यान्त्रीकरण रणनीति तर्जुमाका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न आइतबार यहाँ…
पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआर अध्ययन लम्बियो
काठमाडौँ, २४ जेठ । नेपाल र भारतको सीमा नदी महाकालीमा निर्माण हुने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्न अझै केही समय लाग्ने भएको छ…
खिवाङमा लघुजलविद्युत् परियोजना निर्माण
बाबियाचौर (म्याग्दी), २४ जेठ । म्याग्दीको मुदी गाविसको ६ र ७ नं वडामा पर्ने खिवाङ गाउँमा लघुजलविद्युत् परियोजना निर्माण भएको छ । बेलायतको कल्याणकारी संस्था (कादुरी एग्रिकल्चर एन्ड एसोसिएसन)को सहयोगमा…
काठमाडौँ, २३ जेठ । नेपालमा आयोजना गरिने विमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हालै प्रकाशित समाचारप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सन् २०१४ मार्चमा म्यान्मारको…
काठमाडौँ, २३ जेठ । सरकारले पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणका लागि रु एक अर्ब ३७ करोड ८७ लाख रकम उपलब्ध गराएको छ । यस आयोजनाका लागि चिनिया पक्षबाट थप रु २१…
मुगु, २३ जेठ । यस वर्ष विभिन्न पाटनमा सङ्कलन गर्न पुगेका सङ्कलकबाट प्रवेश शुल्कबापत लगिएको शुल्कबाट रु ७५ लाख स्थानीय कर उठेको छ । सदा झँै यार्सा टिप्न जाने प्रवेशद्वार…
दोहा(कतार) २३ जेठ । कतारमा कार्यरत गोरखावासीले आफ्नो गृह जिल्लामा रु २८ लाखको अक्षयकोष निर्माण गरेका छन् । विधिवत् रुपमा नेपालमा दर्ता गर्दै भूकम्पबाट क्षति पुरयाएको सामुदायिक विद्यालयको पुनःनिर्माण एवम्…
काठमाडौँ, २३ जेठ । विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएर पनि स्थायी लेखा नम्बर लिई आयकर नतिर्नेलाई जनचेतना जगाउने उद्देश्यले करदाता सेवा कार्यालय चाबहिलले करदाता शिक्षा सञ्चालन गरेको छ । शनिबार…
आयोजना प्रभावितलाई एकीकृत बस्ती सान्जेनको उदाहरणीय काम
रसुवा, २२ जेठ । मुलुकभित्र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा बस्ती स्थानान्तरण र जग्गा प्राप्तिको विषय प्रमुख समस्याका रुपमा रहिरहेको बेला चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले भने नयाँ नमुना प्रस्तुत गरेको छ । सबैतिर…
काठमाडौँ, २१ जेठ । ‘कृषिका सम्पूर्ण क्षेत्रमा साम्राज्यवादद्वारा लादिएको नवउदारवादी नीतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ’ भन्ने नाराका साथ आजदेखि प्रथम विश्व किसान सम्मेलन नेपालमा सुरु भएको छ । सो सम्मेलनमा भारत,…
काठमाडौँ, २१ जेठ । व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल नेपाललाई कानुनअनुसार पुँजीगत लाभकर तिराउन र सोको जानकारी समितिलाई गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको…
छ वर्षदेखि राजस्व बाँडफाँड भएन
गोरखा, २१ जेठ । जिल्ला विकास समितिले विगत छ वर्षदेखि पर्यटन राजस्व रकम बाँडफाँड गर्न सकेको छैन । मनास्लु आरोहण र मनास्लु सर्किट पदयात्रामा आएका पर्यटकबाट सङ्कलित रु तीन करोड…
सार्वजनिक संस्था कर्मचारी सङ्गठन नेपालको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन
काठमाडौँ, २१ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले धेरैले नसोचेको काम गरेर देखाउने बताउनुभएको छ । सार्वजनिक संस्था कर्मचारी सङ्गठन नेपालको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले…
चितवन, १९ जेठ । सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि भरतपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण हुने भएको छ । उद्योग सङ्घ चितवनको अगुवाइमा भरतपुरको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय परिसरमा प्रदर्शनी…
छत्तीस हजार घरधनीसँग अनुदान सम्झौता
काठमाडौँ, १६ जेठ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट घर क्षति भई अनुदान पाउने १० जिल्लाका ३६ हजार २८७ घरधनीसँग सम्झौता गरेको छ । ओखलढुङ्गामा १० हजार ७३३, रामेछापमा १३ हजार…
बजेटको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतिपूर्ण
चितवन, १६ जेठ । यहाँका उद्योगी व्यवसायी र राजनीतिक दलका जिल्लास्थित नेताले सरकारले हिजो प्रस्तुत गरेको बजेट समग्रमा राम्रो रहेपनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका छन् । जिल्लाका कतिपय व्यवसायीले…
काठमाडौँ, १६ जेठ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रका लागि पर्याप्त योजना तथा कार्यक्रम नभएको भन्दै पत्रकारिता क्षेत्रबाट निराशा व्यक्त भएको छ ।…
पर्यटकीय विकासका लागि सार्वजनिक बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया
पोखरा, १६ जेठ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्य सम्बन्धमा पोखरेली पर्यटन व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा…
काठमाडौँ, १५ जेठ । आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल लगानीकर्ता शिखर सम्मेलन गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज जारी गर्नुभएको आव २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा उक्त कुरा उल्लेख गर्दै…
सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने
काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले मुलुकका १८ सहरमा सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा…
आर्थिक विकासका लागि बजेटले समेटेका महत्वपूर्ण कार्यक्रम र आयोजना
काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा आज प्रस्तुत गरेको ४५२ बुँदे बजेट वक्तव्यमा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम र आयोजना अघि सारेको छ । बजेट वक्तव्यमा तराई र…
काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट काठमाडौँ–निजगढ दु्रत मार्र्ग सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले ‘सडक सञ्जालको विस्तार समग्र विकासको आधार’ भन्ने नाराका साथ पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यक्रम…
काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले व्यवस्थापिका–संसदमा आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को आयव्ययको अनुमानमा सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । बजेटअनुसार शिक्षामा रु एक खर्ब, १६…
आगामी आवका लागि रु दश खर्ब ४८ अर्ब बजेट
काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि कुल रु १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । व्यवस्थापिका–सांसदको आजको…
काठमाडौँ, १५ जेठ । व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७३/०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमा संविधानको कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, गरिबी घटाउने र गुणस्तरीय सामाजिक सेवा विस्तारको…
खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कानुन बनाई कारबाही गरिने
काठमाडौँ, १५ जेठ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कानुन बनाई कारबाही गरिने भएको छ । यसअघि उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने नेपालमा कुनै कानुन बनेको थिएन । कानुन बनेपछि खेतीयोग्य…
कर्मचारी तलबमा २५ प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौँ, १५ जेठ । व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७३/७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा सरकारी कर्मचारीको विद्यमान तलबमानमा २५ प्रतिशत वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ…
पुनःनिर्माणमा एक खर्ब ४० अर्ब
काठमाडौँ, १५ जेठ । नेपाल सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु एक खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत…
काठमाडौँ, १५ जेठ । व्यवस्थापिका–संसदमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७३/०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दोब्बर गरिएको छ । एकल महिला,…
संसदमा अर्थमन्त्री पौडेलबाट बजेट प्रस्तुत हुँदै
काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्षको…
अाज साढे १० खर्बको बजेट प्रस्तुत हुँदै
काठमाडौं, १५ जेठ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज शनिबार ४ बजे आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाको बजेट व्यवस्थापिका संसदबाट सार्वजनिक गर्दैछन् । गत…
काठमाडौँ, १३ जेठ । नगरपालिकाबाट प्राप्त २८६ आयोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनको लागि रु १० करोड ३८ लाख विनियोजन गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ । “नयाँ १३३ नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको…
“नेपाली अर्थतन्त्रमा केही गर्ने बेला” – नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत
२१औँ शताब्दीमा एसियाभरि नै सम्पन्नतामा नाटकीय वृद्धि भएको छ। चीनमा करोडौँ मानिसहरूको मध्यम वर्गमा बढोत्तरी भएको छ भने भारत विश्वमा नै अति द्रूत गतिमा वृद्धि हुने मुख्य अर्थतन्त्र बन्न पुगेको…
काठमाडौँ, १३ जेठ । सरकारले व्यवस्थापिका–संसदमा आज पेस गरेको चालु आवको आर्थिक सर्वेक्षणमा ऊर्जा क्षेत्रमा भने उल्लेख्य प्रगति नभएको पाइएको छ । एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौतीलगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले…
काठमाडौँ, १३ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण आज व्यवस्थापिका–संसद् समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । सदनमा प्रस्तुत प्रगति विवरणअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको २०७२…
काठमाडौँ, १३ जेठ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ३७ सार्वजनिक संस्थानबाट रु ३३ अर्ब ९२ करोड २७ लाख खुद नाफा भई संस्थानको अवस्थामा सुधार देखिएको छ । सरकारले आज सार्वजनिक…
काठमाडौँ, १३ जेठ । सरकारले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउन ऊर्जा सङ्कट र अवैध निकासी पैठारीको अन्त्य एवम् वित्तीय स्थायित्व प्रमुख चुनौती भएका भन्दै तिनबाट पार पाउनु अहिलेको आवश्यकता…
आर्थिक सर्वेक्षणः कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अत्यन्त न्यून
काठमाडौँ, १३ जेठ । सरकारले सदनसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को आर्थिक सर्वेक्षण आज प्रस्तुत गरेको छ । सर्वेक्षणअनुसार चालु आवमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ० दशमलव ७७ प्रतिशतले वृद्धि हुने…
डेढ करोडको लागतमा आँखा अस्पताल निर्माण हुने
गाईघाट (उदयपुर), १३ जेठ । उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटस्थित आँखा उपचारकेन्द्रको जग्गामा रु एक करोड ५० लाखको लगानीमा नयाँ आँखा अस्पताल निर्माण हुने भएको छ । जापानी राजदूतावासमार्फत जापानको ग्राण्ड एसोसियसन…
काठमाडौँ, १३ जेठ । सरकारले आगामी आव २०७३/७४ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) आगामी शनिबार सदनसमक्ष पेस गर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको संविधानअनुसार…
आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा पेस हुँदै
काठमाडौँ, १२ जेठ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मुलुकको समग्र आर्थिक स्थितिको मूल्याङ्कनसहितको आर्थिक सर्वेक्षण भोलि संसद्मा पेस गर्दैछ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले व्यवस्थापिका–संसद्को भोलिको बैठकमा चालु आवको…
नक्कली डलर र भारुको कारोबारमा संलग्न आठ पक्राउ
काठमाडौँ, ११ जेठ । जाली अमेरिकी डलर १९ हजार ५०० र जाली भारतीय रुपैयाँ ३६ लाखसहित एक पाकिस्तानी नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, विशेष ब्युरोको सूचनाका…
‘छरितो सेवाका लागि कर्मचारीको तलब बढाउनैपर्छ’– अर्थविद्
काठमाडौँ, १० जेठ । विभिन्न अर्थविज्ञले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च भए मात्र जनतालाई दिने सेवा छिटोछरितो हुने भएकाले उनीहरुको तलब वृद्धिमा जोड दिनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लबले आज सरकारले ल्याउने…
यार्सा महोत्सवः संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि नियमावली ल्याइने
रन्मामैकोट हान्पा (रुकुम), १० जेठ । बुहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा (जीवनबुटी) को संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि तय गरेर नियमावली बनाइने भएको छ । रुकुमको विकट क्षेत्र हान्पामा आइतबारदेखि सुरु भएको…
अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध गोष्ठीको १० बुँदे घोषणापत्र, लुम्बिनी बुद्ध धर्मको उद्गमस्थल र कर्मथलो भएको स्वीकार
लुम्बिनी (रुपन्देही), ८ जेठ । बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर सरकारले काठमाडौँमा जेठ ६ र ७ गते अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध गोष्ठीले तय गरेको १० बुँदे काठमाडौँ लुम्बिनी घोषणापत्र आज यहाँ सार्वजनिक गरिएको…
बुद्ध जयन्तीका अवसरमा लुम्बिनीमा निकै हर्षोल्लास
लुम्बिनी, ७ जेठ । सरकारले विशेष रुपमा मनाउन लागेको २५६०औँ बुद्ध जयन्तीका अवसरमा बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीमा अहिले निकै हर्षोल्लास छाएको छ । लुम्बिनी परिसर चिटिक्क पारेर सजाइएको छ । ठाउँठाउँमा…
पथरी (मोरङ), ७ जेठ । विराटनगरमा कुल १४ करोड ११ लाख रुपैयाँको लागतमा अढाइ तल्ले अत्याधुनिक तथा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण हुने भएको छ । बसपार्क निर्माणका लागि विराटनगर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी…
चीन–नेपाल–भारत सम्बन्धः अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
काठमाडौँ, ६ जेठ । चीन–नेपाल–भारत सम्बन्धका प्रमुख प्रवृत्ति र नेपालको नवीन विकासका रणनीति विषयक दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आज यहाँ सुरु भयो । साउथ एसियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट (सियाम), इन्स्टिच्युट फर…
पर्यटन बोर्ड र एनआरएनबीच हस्ताक्षर
काठमाडौँ, ४ जेठ । ‘अतिथि देवो भवः अभियानअन्तर्गत नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्ड र गैरआवासीय नेपाली सङ्घबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आज यहाँ आयोजना गरेको…
विदेश पढ्न जानेको संख्या बढ्दो
काठमाडाैं, ४ जेठ । नेपालको बिग्रँदै गएको आर्थिक स्थिति, रोजगारीको अभाव, नाकाबन्दी, बन्द हडताल, आदिले गर्दा विदेश पढ्न जानेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २८ हजार…
अख्तियारद्वारा ५९ जना उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई उन्मुक्ति
काठमाडाैं, ४ जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेको आरोप लागेका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त ५९ जना उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान…
काठमाडौँ, ३ जेठ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्न लालायित देशभित्र र बाहिरका आरोहीहरु यतिखेर सफल आरोहण गरेर कीर्तिमान कायम गर्ने धूनमा छन् । आरोहण रोकिएको दुई वर्षपछि गत वैशाख…
काठमाडौँ, ३ जेठ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अनुदान वितरणका लागि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई रु १२ अर्ब ४१ करोड रकम निकासा गरेको छ ।…
संरक्षित ६० हजार वन क्षेत्रमा आगलागी
काठमाडौँ, ३ जेठ । देशको विभिन्न भागमा फैलिएको डढेलोले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रभित्रका ६० हजारभन्दा बढी हेक्टर वन क्षेत्र नष्ट भएको छ । यसअघि वन विभागले तीन लाख…
काठमाडौँ, ३ जेठ । नेपाल सरकारले कर्मचारीलाई आयकरमा दिँदै आएको कर छुट सीमाको सहुलियतमाथि विवाद देखिएको छ । आयकर छुटको सीमा व्यक्तिका लागि दुईलाख ५० हजार र दम्पतीका लागि तीन…
पर्सा, ३१ वैशाख । ट्याङ्कर चालकले अवरुद्ध गरेको इन्धन ढुवानी आज दिउँसोदेखि खुल्ला भएको छ । नेपाली ट्याङ्कर चालकलाई कुटपिट गरेका रक्सौलस्थित भारतीय प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक राजेश्वरप्रसाद साहलाई त्यहाँबाट हटाइएपछि…
धुन्चे (रसुवा), ३१ वैशाख । नेपाल–चीनबीच कारोबार भइरहेको एक मात्र उत्तरी नाका रसुवागढी नाकामा सामान बोक्ने मालवाहक कन्टेनरको आवागमन क्रमिक रुपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार दैनिक…
सल्यान, ३१ वैशाख । सल्यान जिल्लामा बिहीबार बेलुका ४६ वर्षपछिकै ठूलो वर्षा भएको छ । बिहीबार बेलुका भएको भीषण वर्षाले वाफुखोला गाविसमा लाखौँको क्षति पु¥याएको छ । वर्षापछि आएको बाढीले…
डायलाइसिस सेवा सँधैका लागि निःशुल्क
काठमाडौं, ३१ बैशाख ।सरकारले मृगौला रोगीलाई डायलाइसिस सेवा सँधैका लागि निःशुल्क गराउने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले मृगौला पीडितको उपचारमा थप सहयोग पुग्ने गरी यस्तो निर्णय गरेको हो…
उत्पादनलाई वित्तीय प्रणालीमा नजोडेसम्म मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नहुने
काठमाडौं, ३१ बैशाख । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले उत्पादनलाई वित्तीय प्रणालीमा नजोडेसम्म मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताउनु भयो । आगामी आ.व. २०७३/७४ को बजेट तयारीका सम्बन्धमा…
काठमाडांैँ, ३० वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसम्बन्धी पाँचवर्षे कार्ययोजना व्यवस्थापिका–संसद्मार्फत आज सार्वजानिक गर्नुभयो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले यही पुस १० गतेदेखि कार्य सुरु गरेको थियो । उहाँले…
काठमाडौँ, ३० वैशाख । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावलले अमेरिका र नेपालबीच विकास निर्माण तथा सुरक्षाको क्षेत्रमा सहयोग अझ अभिवृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको बताउनुभएको छ । आफ्नै कार्यकक्षमा नेपाल भ्रमणमा…
गोरखा, ३० वैशाख । यस जिल्लामा पुनःनिर्माणका लागि गाउँ गाउँका युवालाई सिकर्मी र डकर्मी तालिम दिइएको छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरणले लाभग्राहीलाई अनुदान रकम वितरण गरेपछि धमाधम घर बनाउन सुरु गर्ने…
फलेवास (पर्वत), ३० वैशाख । ठूलीपोखरी–३ की सुनिता परियारका घरमा परिवारका पाँचजना सदस्य र दुईवटा गाईभैँसी रहेका छन् । पाँच जनाको परिवार र दुईवटा गाईभैँसीलाई गरी दैनिक ६ गाग्रीसम्म पानी…
नेपालभन्दा बाहिर कमाएको रकम कानुनसम्मत
काठमाडाैं, ३० बैशाख । गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएन) का संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले आफूले नेपालभन्दा बाहिर कमाएको रकम कानुन अनुसार विदेशमा लगानी गरेको बताएका छन् । पानामा पेपर्सको दोस्रो…
काठमाडौँ, २९ वैशाख । निजी विद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना नै शुल्क बढाएको पाइएको छ । आज शिक्षा मन्त्रालय, विद्यार्थी सङ्गठन र अभिभावकले गरेको अनुगमनमा विद्यालयले मन्त्रालयबाट स्वीकृत नै नगराएर शुल्क…
हुन्डीको कारोबारमा संलग्न पन्ध्रजना पक्राउ
काठमाडौँ, २९ वैशाख । प्रहरीले राजधानीको न्युरोड क्षेत्रमा सञ्चालित हुन्डीको कारोबारमा संलग्न पाँचजना सञ्चालकसहित १५ जनालाई आज साँझ पक्राउ गरेको छ । उनीहरूको साथबाट प्रहरीले रु एक करोड ७४ लाख…
सरकार आफैँले निर्माण गर्ने आयोजना थन्किए
काठमाडौँ, २८ वैशाख । सरकार आफैँले निर्माण गर्ने भनिएको २१५ वटा जलविद्युत् आयोजनाको सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि निर्णय हुन नसक्दा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुनसकेको छैन । ‘बास्केट फन्ड’…
काठमाडौँ, २८ वैशाख । व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आजदेखि प्रारम्भ भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल गर्न यही वैशाख २८, २९ र ३० गतेका…
काठमाडौँ, २७ वैशाख । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु दुई करोड ८३ लाख ६८ हजार ३० भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दुग्ध विकास संस्थानका प्रबन्धक डा शत्रुघनप्रसाद साहविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर…
स्थानीय निकायको निर्वाचन यही सरकारले गराउँछ– सञ्चारमन्त्री
काठमाडौँ, २७ वैशाख । सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले वर्तमान सरकारले नै स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी मङ्सिरमा गराउने बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले निर्वाचन गराउने…
सल्यान, २७ वैशाख । विभिन्न सामुदायिक वनमा लागेको डढेलाले १५ हजार हेक्टर वन क्षेत्र खरानी भएको छ । खडेरीका कारण सुख्खा भएको वन क्षेत्रमा गत चैत पहिलो सातादेखि नै डढेलो…
काठमाडौँ, २७ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २५६०औँ बुद्ध जयन्ती तथा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनले बुद्धसम्बन्धी भएका भ्रम चिर्न सफल हुने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा २५६०औँ बुद्ध जयन्ती…
काठमाडौँ, २७ वैशाख । सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजनामा समावेश गरिएका विषय वस्तुलाई नै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर योजनालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ । दश…
काठमाडौँ, २७ वैशाख । पर्यटनको दरिलो आधार मानिने मुलुकको पर्वतीय पर्यटनले आशातित नतिजा दिन थालेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले थलिएको पर्यटन क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्कदैँ गरेको सन्दर्भमा हिमाल आरोहणको…